June 2009 | လင်္ကာဒီပအရှင်
The Way of Education for New Generation
Posted by linkardipa-ashin at 5:00 PM
ယခုခေတ်မှာ လူတော်တော်များများဟာ ဘာ့ကြောင့် ရဟန်းတော်တွေ ၀ါဆိုကြရတယ်ဆိုတာကို မသိကြတော့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဦဇင်း အနည်းငယ် တင်ပြပေးလိုက်တာပါ။ မြတ်စွာဘုရား သက်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်အခါတုန်းက တပည့်ရဟန်းတော်တွေဟာ သာသနာပြန့်ပွားဖို့ နယ်လှည့်ပြီး တရားဟော တရားပြ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ နေပူမရှောင် မိုးရွာမရှောင် သွားလာလှည့်ပတ်ကြတာဆိုတော့ မိုးတွင်းကာမှာ တောင်သူလယ်သမားတွေ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ သစ်ပင်၊ စိုက်ပျိုးပင်တွေကို မတော်တဆ မလွှဲသာမရှောင်သာ နင်းမိကြတာပေါ့။ အဲဒီခေတ် အိန္ဒိယမှာ သစ်ပင်တွေကို သက်ရှိလို့ သတ်မှတ် ကိုးကွယ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ အဲဒီလို သစ်ပင်တွေ စိုက်ပျိုးပင်တွေ သေကြေ ပျက်စီးတာတွေကို မြင်ပြီးတော့ သစ်ပင်တွေကိုသက်ရှိလို့ သတ်မှတ်သူတွေက ရဟန်းတော်တွေကို သားသတ် သမားတွေလို့ စွပ်စွဲကဲ့ရဲ့ ရှုတ်ချကြပါတယ်။ ရဟန်းဂေါတမရဲ့တပည့်တွေဟာ စိုက်ပျိုးပင်ငယ်တွေ ပိုးမွှားတွေကိုနင်းချေ သတ်ဖြတ်ပြီးတော့ တနှစ်ပတ်လုံး ဘာ့ကြောင့်သွားလာနေကြတာလဲ။ တိတ္ထိဆရာတွေရဲ့တပည့်တွေတောင်မှ မိုးတွင်းကာလမှာ ခရီးမသွားဘဲ ကြောင့်ကြမဲ့နေထိုင်ကြတယ်။ ယုတ်စွ အဆုံး ကျေးငှက် တိရစ္ဆာန်တွေတောင် မိုးတွင်းကာလမှာ မိမိအသိုက်မှာဘဲ နေထိုင်ကြတယ်တယ်။ ရဟန်းတော်တွေကြောင့် သစ်ပင်ငယ်တွေ ပိုးမွှားတွေ သေကျေပျက်စီးရတယ်လို့ စွပ်စွဲကဲ့ရဲ့ကြပါတယ်။ သစ်ပင်တွေကိုသတ်ရှိအဖြစ်သတ်မှတ်ကိုးကွယ်နေတဲ့သူတွေကတော့ ရဟန်းတော်တွေကို ရန်မူတဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မြတ်စွာဘုရားက မိုးတွင်း (၃)လ မှာ ခရီးမထွက်ရ မိမိကျောင်းအတွင်းမှာဘဲ နေထိုင် ၀ါဆိုဝါကပ်ရမယ်လို့ ပညတ်တော်မူပါတယ်။ ၀ါဆိုဝါကပ်ပုံမှာ ။
ဣမသ္မိံ ၀ိဟာရေ ဣမံ တေမာသံ ၀ဿံ ဥပေမိ။
ဟူ၍ (၃)ခေါက်ဆိုကာ ၀ါဆို ၀ါကပ်ရပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ မိုးတွင်းသုံးလပတ်လုံး မိမိနေထိုင်သော ဤကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာသာ နေထိုင်ပါမည်လို့ ကတိပြောကြားတာပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းတစုံတရာ ပေါ်ပေါက်လာပါက မိုးတွင်းကာလမှာလည်း ခရီးသွားကောင်းတယ်လို့ မြတ်စွာဘုရား အမိန့်ရှိတော်မူပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းတွေကတော့ --
၁။ ဒါတုံ- တစုံတယောက်က အလှူဒါနပြုလုပ်လို၍ ပင့်လျှောက်သောအခါ။
၂။ သောတုံ- တစုံတယောက်က တရားဓမ္မကိုကြားနာလို၍ ပင့်လျှောက်သောအခါ။
၃။ ပဿိတုံ- တစုံတယောက်က ဖူးမြင်လို၍ ပင့်လျှောက်သောအခါ။
ဒီကြောင်း သုံးမျိုးထဲမှာ တမျိုးမျိုးနဲ့ ကိုက်ညီနေရင် ၀ါပန်ပြီးတော့ သွားကောင်းပါတယ်။ ၀ါပန်တယ်ဆိုတာလဲ (၇)ရက်အတွင်းပြန်လာပါမယ်လို့ ကတိပေးတဲ့ သဘောပါဘဲ။
အန္တော သတ္တာဟေ ပဋိနိဝတ္တေဿာမိ။
၁။ ပုရိမ၀ါ- ပထမ၀ါကပ်ခြင်း။ ၀ါဆိုလပြည့်ကျော် (၁)ရက်နေ့မှာ ၀ါကပ်ပြီး သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှာ ၀ါကျွတ်ပါတယ်။
၂။ ပစ္ဆိမ၀ါ- ဒုတိယ၀ါကပ်ခြင်း။ ၀ါခေါင်လပြည့်ကျော် (၁)ရက်နေ့မှာ ၀ါကပ်ပြီး တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့မှာ ၀ါကျွတ်ပါတယ်။
ကဲ ဒီလောက်ဆို ၀ါဆိုဝါကပ်ပုံအကြောင်းလေးကိုတော့ တီးမိခေါက်မိ ရှိလောက်ပါပြီနော်….။
“ တမ္ဗပဏ္ဏိမှ မှတ်တမ်း ”
သာသနာ့သမိုင်းမှာ အလွန်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ သီဟိုဠ်ခေတ် စံတော်ဝင် အရိယာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ် အများအပြား သီတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ဘက် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်း၌ တည်ရှိတဲ့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသို့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးရက်တစ်ရက်မှာ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ယခင်က သီဟိုဠ်ကျွန်းလုိ့ ခေါ်ဆိုကြပြီး ပါဠိစာပေတွေထဲမှာတော့ သီဟဠ၊ တမ္ဗပဏ္ဏိ၊ လင်္ကာဒီပ ဆိုပြီး ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတဲ့ ဒီနိုင်ငံကိုရောက်တော့ မထင်မှတ်တဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတစ်ချို့က ကိုယ့်အတွက် မှတ်တမ်းလေးတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သေချာတာတစ်ခုက အဲဒါဟာ ဘုရားဖူးမှတ်တမ်း မဟုတ်သလို၊ ခရီးသွားလမ်းညွှန်းမှတ်တမ်းတစ်စောင်လည်း မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ပြောနိုင်တာကတော့ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံလေးတစ်ချို့နဲ့ ခံစားချက်လေးတွေ ထည့်ထားတဲ့ မှတ်တမ်းလေး တစ်ခုပါပဲ။
ဒီနိုင်ငံကိုရောက်တော့ ပထမဦးဆုံး အလွန်စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာက ပန်းကလေးတွေနဲ့တူတဲ့ ကလေးလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်နေခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ်နေတဲ့ကျောင်းက တရားရိပ်သာ(Meditation Centre)တစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်လည်း တရားလာအားထုတ်တဲ့ ယောဂီတွေကိုသာ အထူးသဖြင့် တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီကိုရောက်ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ဆွမ်းစားကျောင်း အပြင်ဘက်က ခုံတန်းတွေပေါ်မှာ အဖြူရောင်တူညီဝတ်စုံတွေ ၀တ်ထားတဲ့ ကလေးလေးတွေကို မိခင်ဖြစ်သူတွေနဲ့အတူ စပြီး တွေ့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ သူတို့လေးတွေကလည်း ဒီနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့ကိုယ့်ကို စူးစမ်းနေတဲ့မျက်ဝန်းနဲ့ အမြဲတန်း လိုက်ကြည့်လေ့ရှိကြတယ်။ ဒါတွေက သိပ်မဆန်းပေမယ့် တွေ့လိုက်တိုင်းလည်း ဒီလိုအချိန် ဒီအဖြူရောင် ၀တ်စုံလေးတွေနဲ့ ကလေးလေးတွေကို ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ တွေ့တွေ့နေရတာကတော့ နည်းနည်း ဆန်းနေသလိုပါပဲ။ ဒီကလေးတွေ ဒီကျောင်းကို ဘာလာလုပ်တာလဲပေါ့…လို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တွေးနေမိတယ်။
ပြီးတော့ သူတို့က နေ့တိုင်းလာတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို တွေ့လိုက်ရင်လည်း ဆွမ်းစားကျောင်းက ပြန်လာတဲ့အချိန် ၇း၃၀ လောက်မှာ အဲဒါက ပုံမှန်အချိန်ပဲ။ ဒီလိုနဲ့… တစ်ရက်မှာတော့ အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့ မိခင်ဖြစ်သူအမျိုးသမီးက လာပြီးမိတ်ဆက်ပါတယ်။ သူနဲ့ကပ်ရက်မှာတော့ ကိုယ့်ကိုစူးစမ်းနေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ ပြုံးပြလေ့ရှိတဲ့ ကလေးလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်း တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီနောက် မိခင်ဖြစ်သူက သူ့သားနဲ့သမီးအကြောင်းကို ပြောပြရင်း ကလေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ ရှစ်နှစ်အရွယ်သားငယ်နဲ့ ဆယ်နှစ်အရွယ် သမီးလေးကလည်း သူတို့ရဲ့ မိခင်လိုပဲ ယဉ်ကျေးသိမ့်မွေ့ ကြပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားကိုလည်း ပြောနိုင်ကြပါတယ်။ ကလေးတွေကို Sunday School လိုက်ပို့ပေးတာ ဖြစ်ကြောင်း အဲဒီအမျိုးသမီးက ပြောပြတော့မှပဲ သူတို့ဒီကိုလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကို အပြည့်အစုံ သိလိုက်ရပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့ အဓိကလာတဲ့နေရာက ကိုယ်နေတဲ့တရားရိပ်သာကို မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကျောင်းဝင်းရဲ့ကပ်ရက် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းက Sunday School ကို လာတာဖြစ်ပြီး ဟိုဘက်မှာ လူအရမ်းများနေလို့ ကျောင်းချိန်မစခင် ဒီမှာခဏ၀င်ပြီး ကလေးတွေကို မနက်စာမုန့်ကျွေးရင်း လာဝင် နားတာပါ..လို့ ရှင်းပြတော့မှ သဘောပေါက်သွားတော့တယ်။
ဟုတ်ပါတယ်… ကိုယ်နေတဲ့ ကျောင်းဝင်းရဲ့ဘယ်ဘက်ကပ်ရက်မှာ ဒီနိုင်ငံရဲ့သမ္မတကိုးကွယ်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းကို လေးငါးခေါက်လောက် ရောက်ဖူးပြီး ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်နဲ့လည်း စကားပြောဖူးပါတယ်။ Buddhist Channel ဆိုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်တဲ့ TV အစီအစဉ်တွေလည်း အဲဒီကျောင်းထဲမှာ ရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အမေးအဖြေကဏ္ဍတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးတဲ့ အသံလွှင့် Studio-ခန်းထဲကို ကိုယ်တို့ကို လိုက်ပြပေးဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကျောင်းမှာ ကလေး ၅၀၀ ကျော်လောက်ကို သင်ကြားပေးနေတဲ့ (သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ ဆိုရင်) Daham Pasala လို့ခေါ်တဲ့ ဓမ္မကျောင်း သို့မဟုတ် Sunday School အစီအစဉ် ရှိတယ်ဆိုတာကို တကယ်မသိခဲ့ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကဖွင့်တဲ့ Sunday School ဆိုတာကိုလည်း အဲဒီအမျိုးသမီးနဲ့ စကားပြောတော့မှပဲ ပထမဦးဆုံး ကြားဖူးခဲ့ရတာပါ။ အလွန်လည်း စိတ်ဝင်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ အဲဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာကြည့်မိပါတယ်။ ဒီတော့မှ Sunday School ဆိုတဲ့စနစ်ကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးက ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးနီးပါး တက်ရောက်သင်ကြားကြတယ် ဆိုတာကို အံ့သြစွာနဲ့ သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ (ဒေသခံတွေကတော့ သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ Daham Pasala ဓမ္မကျောင်းလို့ပဲ ခေါ်ဝေါ်ကြပြီး နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ပြောတဲ့အခါလောက်မှ Sunday School ဆိုတာကို သုံးကြတာပါ)
အမှန်တော့ ဒီသင်ကြားရေးစနစ်ကို စတင်ခဲ့တာက ၁၈၉၅-ခုနှစ်ကတည်းကပါ။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဟာ ၁၅၀၅-ခုနှစ်ကတည်းက ပေါ်တူဂီနယ်ချဲ့အစိုးရလက်အောက်ကို ရောက်ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး၊ ၁၆၃၈ မှာတော့ ဒတ်ခ်ျ နယ်ချဲ့အစိုးရကလဲ ၀င်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်း ၁၈၇၆ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၈ ခုနှစ်အထိတော့ ဗြိတိသျှအစိုးရလက်အောက်ကို ရောက်ရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်။ နယ်ချဲ့အစိုးရတွေရဲ့ လက်အောက် ကျရောက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ဘာသာရေးနဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကြီးစိုးလာခဲ့ပါတယ်။ နယ်ချဲ့အစိုးရ လက်အောက်မှာ မှေးမှိန်လာခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေ ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာသံဃာတော်များရဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်တုန်းက အထင်ရှားဆုံးလည်းဖြစ် ဓမ္မကျောင်း သို့မဟုတ် Sunday School ကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်တဲ့ ဆရာတော်ကတော့ Ven. Migettuwatte Gunananda ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ အခက်အခဲမျိုးစုံ၊ အဖိနှိပ် မျိုးစုံကို ကျော်လွှားပြီး ၁၈၉၅ ခုနှစ်မှာ Galle မြို့၊ ၀ိဇယနန္ဒာကျောင်း (Vijayananda Temple) တွင် ဓမ္မကျောင်း သို့မဟုတ် Sunday School ကို စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဒီသင်ကြားရေးစနစ်ကို တစ်နိုင်ငံလုံးရှိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ တညီတညွတ်တည်း ပူးပေါင်းပါဝင်လာအောင် ဆရာတော်သံဃာတော်များနှင့်အတူ ဒကာ၊ဒကာမများကလည်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီထဲက ထင်ရှားတဲ့ ဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား Colonel Steel Henry Olcott ဖြစ်ပါတယ်။
Colonel Olcott ဟာ ၁၈၈၀ ခုနှစ်မှာ ဒီနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာပြီး မကြာခင်မှာပဲ ၀ိဇယနန္ဒာကျောင်း ဆရာတော် Ven. Migettuwatte Gunananda ကို အကြောင်းပြုကာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင် ယုံကြည်လာရာမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဓမ္မကောလိပ်တွေ၊ ဓမ္မကျောင်းတွေ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းတွေကို နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ အများအပြား ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဦးဆောင် လှုပ်ရှားခဲ့သူအဖြစ်လည်း ဒီနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာ ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မှတ်စု အတွဲ (၃) စာမျက်နှာ ၁၄၃ မှာ ရေးသားခဲ့သော “ငါ့မှာ အရေးကြီးသော အကြံအစည်တစ်ခုရှိသည်။ ဤသည်ကား ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် အထူးသဖြင့် ကလေးများအတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးကို စတင်ရန်” ဟူသော စာသားဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအကြားတွင် ထင်ရှားခဲ့တယ်။
၁၈၉၅ ခုနှစ်က Galle မြို့ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကနေ ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုးစနစ်နဲ့ စတင်ခဲ့တဲ့ ဓမ္မကျောင်းတွေဟာ ဆယ်စုတစ်ခုအတွင်းမှာပဲ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအထိ ပျံ့နှံ့ သွားခဲ့ပါတယ်။ နယ်ချဲ့အစိုးရလက်အောက် ကျရောက်နေစဉ် လွတ်လပ်ရေးမရခင် အစောပိုင်းနှစ်တွေ ကတည်းက ဓမ္မကျောင်းလို့ ခေါ်ကြတဲ့ Sunday School စနစ်ဟာ ဒီနိုင်ငံမှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ အမြစ်တွယ်နေခဲ့ပါပြီ။ ဘာသာခြား တိုင်းတစ်ပါးသား အစိုးရလက်အောက်အတွင်း အဖိနှိပ်အချုပ်ခြယ်ကြားထဲမှာ Private ကျောင်းအသွင်နဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အမြစ်တွယ်သွားအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခု မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ်တို့ သတိထားရမယ့်အချက် ၂-ချက် ရှိပါတယ်။ ပထမအချက်က ဒီနိုင်ငံကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကိုလိုနီနယ်ချဲ့အစိုးရလက်အောက်ကို နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ကြာအောင် ကျရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတောင်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပညာရေးစနစ်တစ်ခုကို ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ဦးမော့လာနိုင်အောင် လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိခဲ့ကြတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကိုယ်တို့နိုင်ငံကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကို မကျရောက်ခင်ကတော့ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းဟာ နိုင်ငံရဲ့ အဓိကပညာရေး အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်အနေနဲ့ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုလိုနီခေတ်လည်းရောက်ရော ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးစနစ်လည်း အညွန့်ချိုးခံလိုက်ရတာ ပြန်ပြီးနလံမထူနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ (ဒီနိုင်ငံနဲ့ ကိုယ်တို့နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရတာ တစ်နှစ်ထဲဖြစ်သလို၊ အဲဒီအချိန်တုန်းက အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ကိုလီုနီအစိုးရဟာလည်း တစ်ခုတည်းရယ်ပါ။)
နောက်ဒုတိယအချက်ကတော့ လူမျိုးခြား Colonel Olcott ပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ သူရဲ့ဘိုးဘွား အစဉ်အဆက်က ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဘာသာမဟုတ်သလို၊ သူရဲ့နိုင်ငံတော်ဘာသာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူက ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် ဘယ်လောက်တောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့သလဲဆိုတာကို သူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဓမ္မကောလိပ်တွေ၊ ဓမ္မကျောင်းတွေ၊ သူ့ကို အမှတ်ရကြလို့ ဂုဏ်ပြုကာ ထုလုပ်ထားတဲ့ ကိုလံဘိုမြို့လယ်ရှိ သူ့ရဲ့ရုပ်တုကြီးက သက်သေပြနေဆဲပါ။ သူကတော့ သေဆုံးသွားပေမယ့် သူပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ အရာတွေကတော့ ရှင်သန်ကြီးထွားနေဆဲပါ။ ဒီလိုဆိုရင် ကိုယ်တို့ကျတော့ရော… ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ကိုယ်တို့ဘိုးဘွားအစဉ်အဆက် ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဘာသာ၊ ကိုယ်တို့နိုင်ငံရဲ့ အဓိကဘာသာ၊ ပြီးတော့ “အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ကြပါ” ဆိုတဲ့ သြ၀ါဒကို သိတတ်နားလည်စ အရွယ်ကတည်းက ကြားနေခဲ့ရတာ ယနေ့အထိ အကြိမ်ပေါင်းမနည်းတော့ပါဘူး။ ကြားခဲ့ရတဲ့ အချိန်တိုင်းမှာလည်း ကိုယ်တို့ကတော့ ခေါင်းလေးတညိတ်ညိတ်နဲ့ပေါ့။ ခေါင်းညိတ်ရုံကလွဲပြီး ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ခဲ့သေးတဲ့ကိုယ့်အဖြစ်ကို တကယ်လို့ Colonel Olcott သာ တွေ့ရင် ကိုယ့်ကို ဟားတိုက်မှာ သေချာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူက သူ့နိုင်ငံသား မဟုတ်တဲ့ကလေးတွေအတွက် ဒီလောက်တောင် စေတနာထား လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ကိုယ်တို့ကတော့ရော ကိုယ်တို့နိုင်ငံက ကလေးတွေအတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့ကြပြီးပြီလဲ..။ အင်း…. ဒီအချက်ကတော့ ကိုယ့်အတွက် အလေးအနက်ထားစရာ အချက်တစ်ခုပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့ အခက်အခဲတွေကြားက ရုန်းထွက်ဦးမော့ခဲ့တဲ့ ဓမ္မကျောင်း သို့မဟုတ် Sunday School စနစ်ဟာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ သမိုင်းမှာ ထင်ရှားတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်-Bandranaike ကြောင့် ပိုပြီး အရောင်တောက်ပခဲ့ပါတယ်။ သူ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် ဒီ Sunday School လို့ခေါ်တဲ့ ဓမ္မကျောင်းတွေကို သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်က ဖွင့်တဲ့ အစိုးရကျောင်းတွေအဖြစ် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ အတန်းတိုင်းအတွက် သင်ရိုးပြဌာန်းစာအုပ်တွေကိုလည်း သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနက ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဓမ္မကျောင်းမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အားလုံးကို အခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးပါတယ်။ စာမေးပွဲတွေကိုလည်း သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြီးမှူးကျင်းပပေးတာဖြစ်ပြီး စာမေးပွဲနဲ့ ပတ်သတ်တာမှန်သမျှကိုလည်း တာဝန်ယူပြီး စီစဉ်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ဓမ္မကျောင်း သို့မဟုတ် Sunday School ၀တ်စုံဆိုပြီးတော့ သီးသန့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့သေးတယ်။ ယောင်္ကျားလေးတွေအတွက်က ဒီနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားဝတ်စုံနဲ့ ဆင်တူတဲ့ လည်ကတုံးရှပ်အင်္ကျင်္ီလက်ရှည်အဖြူနဲ့ လုံချည် အဖြူဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးတွေ အတွက်ကတော့ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာဝတ်စုံဖြစ်တဲ့ Kandyဆာရီနဲ့ အနည်းငယ်ဆင်တဲ့ (သူတို့အခေါ်) Half ဆာရီ ဆိုတဲ့ အထက်အောက် အဖြူရောင်ဝတ်စုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစိုးရက အထက်တန်းကျောင်း အောင်လက်မှတ်များလိုပဲ ဓမ္မကျောင်းအောင်လက်မှတ်ကိုလည်း ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလိုစနစ်တကျနဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်လာတဲ့ Sunday School စနစ်ဟာ ယခု သမ္မတ Mahinda Rajapaksa လက်ထက်မှာတော့ ပံ့ပိုးမှုတွေ အားပေးမှုတွေ ပိုပြီး အားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတကိုယ်တိုင်ကလည်း ကလေးတွေကို Sunday School တက်ဖို့ သူ့မိန့်ခွန်းတွေထဲကနေရော အပြင်မှာဆုံတွေ့တဲ့အခါမှာရော အကြိမ်ကြိမ်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ သာမန်အောင်လက်မှတ် အဆင့်သာရှိတဲ့ ဓမ္မကျောင်းအောင်လက်မှတ်ကိုလည်း အဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ အလုပ် ခန့်အပ်မှုမှာ ဒီ Sunday School အောင်လက်မှတ်ဟာ အရေးပါတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ လိုအပ်နေပြီး အဲဒါကိုလည်း အစိုးရက တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း ကျောင်းသားမိဘတွေက ပြောပြကြပါတယ်။ (ဒီနေရာမှာ.. တခြားဘာသာခြားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရဲ့ အောင်လက်မှတ်ကို ဆိုလိုပါတယ်လို့ ရှင်းပြကြပါတယ်။) “ အခုဆိုရင် Sunday School အောင်လက်မှတ်ဟာ တက္ကသိုလ်ဆက်တက်မဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက် အရေးပါတဲ့ လက်မှတ်တစ်ခု ဖြစ်နေပါပြီး” လို့ အဲဒီမှာ စာသင်ပေးနေတဲ့ သီလရှင်ကြီးတစ်ပါးက ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ပြောတုန်းက ကိုယ့်မှာတော့ သူနဲ့အတူရောပြီး (သူတို့အတွက်) ၀မ်းသာဂုဏ်ယူနေမိတယ်။
ဒီနိုင်ငံကိုရောက်ပြီးနောက်ပိုင်း အပြင်သွားစရာကိစ္စပေါ်ရင် အမြဲလိုလိုလိုက်ပို့ပေးတတ်တဲ့ ဒကာမကြီးက တချို့သော သူ့ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ တခြားမြို့တွေက ဘုရားတွေဆီ လိုက်ပို့ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်တို့ ခရီးထွက်ချိန် တနင်္ဂနွေ မနက်စောစောတွေမှာ ဆိုရင် ဖြတ်ကျော်သွားနေတဲ့ မြို့တွေ ရွာတွေရဲ့ လမ်းဘေးတလျှောက်မှာတော့ ဓမ္မကျောင်းက ကလေးများရဲ့ ၀တ်စုံ အဖြူရောင်တွေ လွှမ်းနေတော့တာပေါ့..။ အဖြူရောင်တူညီဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ခြေလှမ်းတွေက လန်းဆန်းတက်ကြွစွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဆီ ဦးတည်လို့ ..၊ သူတို့လေးတွေရဲ့ မျက်နှာမှာတော့ အပြုံးပန်းတွေဝေလို့..၊ သူတို့အာရုံထဲမှာတော့ သူတို့သွားနေတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဟာ သူတို့အတွက် စိတ်ဓါတ်နဲ့ အကျင့်စာရိတ္တတွေ အရောင်မြှင့်တင်ပေးတဲ့နေရာ စံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းကို လေ့လာခွင့်ရမဲ့နေရာ…. ဆိုပြီး ယုံကြည်မှုတွေပြည့်လို့..။ ကားပေါ်ကနေ လှမ်းမြင်နေရတဲ့ ဒီမြင်ကွင်းတွေကတော့ ကိုယ့်အတွက် ကျက်သရေရှိလွန်းလှပါတယ်။ မြို့တွေ၊ ရွာတွေ ဖြတ်သွားတိုင်း အဲဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးကို ကိုယ်က မရိုးနိုင်အောင် လိုက်ငေးနေတော့တာပဲ။ ကားက မြို့တွေရွာတွေကို ကျော်လွန်သွားပေမဲ့လည်း ကိုယ့်အာရုံထဲမှာတော့ အတွေးတွေက တ၀ဲလည်လည်ပါပဲ။ အင်း…ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကိုယ်တို့နိုင်ငံက ကလေးတွေရော ဘယ်ဆီကိုများဦးတည်သွားနေကြမလဲ….၊ သူတို့တွေကရော ဘုန်တော်ကြီးကျောင်းတွေကို ဘယ်လို သဘောထားကြမလဲ……..။
တစ်ခါမှာတော့ ရှေးဟောင်းဆင်းတုတော်တွေဖူးရန်နဲ့ ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦလေးတစ်ခုကို လေ့လာရန် နယ်မြို့တစ်မြို့ရဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကို မိတ်ဆွေတွေက ခေါ်သွားပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ကိုယ်တို့ရောက်သွားတဲ့ အချိန်က Sunday School စာသင်ချိန်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကိုယ်တို့လဲ စာသင်နေတဲ့နေရာကို အရင်သွားပြီး လိုက်ကြည့်ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာတွေ့ရတာကတော့ အသက်အရွယ်လိုက် အတန်းတွေ ခွဲခြားထားပါတယ်။ သူငယ်တန်း၊ ပြီးတော့ ၁တန်းကနေ ၁၀တန်းအထိရှိတဲ့အပြင် (Finnal 1 ,2) နောက်ဆုံးနှစ် ၂နှစ် အပါအ၀င် အတန်းတွေကို အဆင့်ဆင့် ခွဲခြားထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီဓမ္မကျောင်း သို့မဟုတ် Sunday School အတွက် သင်ရိုးပြဌာန်းထားတာတွေကတော့
1. Pāli language (ပါဠိဘာသာ)၊
6. Recitation of Pāli passages and stanzas (ပါဠိတော်များကို ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ခြင်း)၊
8. Buddhist meditation (ဘာဝနာ တရားပွားများခြင်း) တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ အတန်းစဉ်ကို လိုက်ပြီး သင်ရိုးတွေကို တဖြည်းဖြည်းချင်းမြှင့်ထားပါတယ်လို့ ရှင်းပြကြပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ၊ သီလရှင်တွေအပြင် ဆရာ၊ ဆရာမတွေကလည်း ၀ိုင်းဝန်းကူညီသင်ကြားပေးကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ သင်ကြားရေးပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိရှိရတာ နောက်တစ်ခုကတော့ ၁၉၆၀မှာ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်တဲ့ Buddhist Theosophical Society (BTS) ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီအဖွဲ့က သင်ကြားမှုနည်းစနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ ဆရာဖြစ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ Sunday School ကျောင်းသားဟောင်းများကိုလည်း ဆရာများအဖြစ် ထိုသင်တန်းများမှ မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရစာမေးပွဲများမှတဆင့် စဉ်ဆက်မပျက် အကဲဖြတ်ခြင်းဟာ အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ ဓမ္မကျောင်းဆရာများ မွေးထုတ်ပေးခြင်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်လို့ ရှင်းပြကြပါတယ်။ သတိထားကြည့်မိသလောက်တော့ ဒီ Sunday School စနစ်ကို ဒီနိုင်ငံက ပညာတတ်လူတန်းစားတွေ အထူးအားပေးကြတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအချက်တွေဟာ ကိုယ့်အတွက်တော့ မှတ်တမ်းလေးတွေ ဖြစ်လို့ပေါ့။
ဒီလိုနဲ့.. နိုဝင်ဘာလရဲ့ ရက်တစ်ရက်မှာတော့ မြန်မာ့သမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ ကန္ဒီစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့နေရာ၊ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ ကန္ဒီ(Kandy)မြို့ ကနေ ကီလိုမီတာ ၂၀လောက်ဝေးတဲ့ နေရာက ခြံကြီးတစ်ခြံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီခြံကြီးထဲမှာ ကိုယ်နဲ့ အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ မိသားစုတစ်စုနေထိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့မိသားစုက စီစဉ်ပြုလုပ်တဲ့ အလှူအတွက် လာဖိတ်ကြတာနဲ့ အဲဒီကိုရောက်ဖြစ်သွားရတော့တယ်။ လာကြိုတဲ့ကားက အလှူလုပ်တဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့ မနက် ၉နာရီခွဲလောက်ရှိပါပြီ။ အဲဒီနေ့က တနင်္ဂနွေနေ့ပါ။ ကိုယ်တို့လဲရောက်တော့ အိမ်ရှင်တွေက ထွက်ကြိုနှုတ်ဆက်ကြတာပေါ့။ အဲဒီအိမ်မှာက သားသမီးဆိုလို့ ၁၃နှစ်အရွယ် သမီးလေးတစ်ယောက်ပဲရှိပြီး ကိုယ်နဲ့လဲ အလွန်ရင်းနှီးပါတယ်။ ကိုယ်ရောက်တော့ အဲဒီကလေးမလေးရဲ့ မိဘတွေကို နှုတ်ဆက်ရင်း သူ့ကို မတွေ့တာနဲ့ မေးကြည့်လိုက်တော့ “ဒီနေ့ Sunday School ရှိတယ်လေ..၊ အဲဒီမှာ အစမ်းစာမေးပွဲလေးလည်း ရှိလို့ပါ..၊ ၁၁နာရီ မထိုးခင် တရားပွဲအမီ ပြန်လာပါလိမ့်မယ်” လို့ပြန်ဖြေပါတယ်။
ပုံမှန်အချိန်ဆိုရင်တော့ ဒါက မထူးဆန်းပေမဲ့ အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ ဒီစကားကို ကြားရတော့ နဲနဲဆန်းနေသလိုပါပဲလို့ ထင်မိတယ်။ တကယ်တော့ ဒီအလှူက သူတို့မိသားစုအတွက် အလွန်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အလှူပါ။ ကိုလံဘိုက ဆရာတော်တွေနဲ့ လူတွေတချို့ကိုတောင် ဖိတ်ကြားထားတာပါ။ ပြီးတော့ သူတို့မိသားစုအတွက် ၀မ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံး ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့ကို အမှတ်တရ ပြုလုပ်တဲ့ အခမ်းအနားလေးပါ။ ဒီလိုနေ့မျိုးမှာတောင် အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ကလေးမလေးက Sunday School ကို သွားဖို့ မပျက်ကွက်ခဲ့ဘူး။ မိဘတွေဘက်ကလည်း အားပေးတိုက်တွန်းပြီး ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့ လိုက်ပို့ပေးတာပဲ။ ကိုယ်ကတော့ ဒီအခြေအနေလေးတွေကိုကြည့်ပြီး မိဘတွေဘက်ကရော ကလေးတွေဘက်ကပါ Sunday School အပေါ်ထားတဲ့ လေးနက်မှုတွေကို သိလိုက်ရတော့တယ်။ တကယ်တော့ သင်ကြားရေးစနစ်တစ်ခုမှာ သင်ကြားပြသပေးတဲ့သူတွေသာမက တက်ရောက်သင်ကြားကြတဲ့သူတွေဟာလည်း အလွန်အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။ သင်ကြားရေးစနစ်တစ်ခု အောင်မြင်ဖို့ အတွက် ကလေးတွေဘက်က စိတ်ပါဝင်စားမှု အလေးအနက်ထားမှုတွေ လိုအပ်သလို မိဘတွေဘက်လဲ တိုက်တွန်းအားပေးမှု ၊ ပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်ပေးဖို့လည်း အထူးလိုအပ်ပါတယ်။
ရောက်ရောက်ချင်း သူ့ကို မတွေ့လိုက်ရပေမဲ့ ဓမ္မကျောင်းကို လေးလေးစားစားနဲ့ မပျက်မကွက်သွားခဲ့တဲ့သူ့အတွက် ကျေနပ်နေမိတယ်။ ပီတိလည်းဖြစ်ရတယ်။ အခမ်းအနားစခါနီးမှာပဲ အဲဒီကလေးမလေး ပြန်ရောက်လာပြီး Sunday School ၀တ်စုံလေးနဲ့ တရားဝင်နာနေတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အခမ်းအနားပြီးတော့ ကိုလံဘိုလိုက်ပြန်မဲ့ ဆရာတော်တပါးက ခဏလောက်နားချင်သေးတယ် ဆိုတာနဲ့ ချက်ချင်းမပြန်ဖြစ်သေးဘဲ ခေတ္တနားဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကိုယ်နားဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့ အခန်းထဲမှာပဲ ပြန်နားရင် တက္ကသိုလ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းထဲက စာတချို့ကို ဖတ်နေလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနေရင်း တအောင့်လောက်ကြာတော့ အလှူကိုလာတဲ့ (အသက်၁၃နှစ်အရွယ်) ဒီအိမ်ရှင်ရဲ့ တူမလေးက အခန်းထဲဝင်လာပြီး ကိုယ့်ဘေးနားကို ရောက်လာပါတော့တယ်။ ကလေးတွေကလဲ ကိုယ်နဲ့ဆို အတော်ဓာတ်တည့်ကြပါတယ်။ တော်တော်လဲ ခင်ကြတယ်။ (ဒီက ကလေးတွေ အင်္ဂလိပ်လို ကောင်းကောင်းပြောနိုင်ကြတယ်။ တချို့ဆို ကိုယ့်ထက်တောင်သာသေး..။) အခုလဲ ကိုယ့်အနားကို ကပ်လာတဲ့ ကလေးမလေးကလဲ ကိုယ်ဘာစာတွေ ဖတ်နေတယ်ဆိုတာ စပ်စုချင်လို့လေ၊ သူက ကိုယ့်ဘေးနားကနေ စာရွက်ထိပ်က ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို ကြည့်ပြီး Mahasanghika Sect (မဟာသံဃိကဂိုဏ်း) ဆိုပြီး အသံထွက်ဖတ်လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ကိုယ်က လက်ထဲကဖိုင်ကိုပိတ်ပြီး သူ့ကိုနောက်ချင်တာနဲ့ အဲဒါဘာလဲ..သိလားဟင် လို့ မေးလိုက်ပါတယ်။ ကလေးမလေးကလည်း ချက်ချင်းပဲ သိတာပေါ့လို့ ပြန်ဖြေတယ်။ ဒါဆိုရင် နဲနဲလောက်ပြောပြပါလားလို့ ဆိုတော့ ကလေးမလေးကလည်း အဲဒီဂိုဏ်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာတချို့ကို တခါတည်း တတွတ်တွတ်နဲ့ ကိုယ့်ကို ပြောပြပါလေတော့တယ်။
ဒီလိုပြန်ကြားရလိမ့်မယ်လို့ လုံးဝမထင်ထားပါဘူး။ အမှန်တကယ်တော့ အဲဒီကလေးမလေးကို နောက်လိုက်တာပါ။ ဒီဂိုဏ်းအကြောင်း သူဒီလောက်အထိ သိနေလိမ့်မယ်လို့ မထင်ခဲ့မိဘူး။ ကိုယ်ဆိုရင်လေ သူ့အသက်အရွယ်လောက်တုန်းက မဟာသံဃိကဂိုဏ်းအကြောင်းမပြောနဲ့ အဲဒီနာမည်ကို ကြားတောင် မကြားခဲ့ဖူးဘူး။ မဟာယာန ဆိုတာကိုတာတောင် ဖားအောက်တောရရောက်တော့မှ စပြီးကြားဖူးတာ.. အော်.ဒီလိုလဲရှိပါလားပေါ့… ဒါတောင် အဲဒီတုန်းက မဟာယာနဂိုဏ်းအကြောင်း သေချာမသိခဲ့ဘူး။ (ကိုယ်ကတော့ အဲဒီလောက်ထိကို ညံ့ခဲ့တာပါ။ အင်း….ခုနေများ ကိုယ်တို့နိုင်ငံက သူ့အရွယ်ကလေးတွေကို အဲဒီလိုမေးကြည့်ရင် ဘယ်လိုဖြေကြမလဲ မသိဘူး…။)
အခု ကိုယ့်ရှေ့က ကလေးမလေးက မြို့ကြီးတွေ ကျောင်းကောင်းကောင်းကြီးတွေမှာ နေခဲ့ရသူတစ်ဦးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကန္ဒီအလွန် ရွာမြို့လေးတစ်ခုကနေ ကြီးပြင်းလာတဲ့ သာမန်အရပ်သူလေးတစ်ဦးပါ။ ဒါနဲ့ကိုယ်ကလည်း သူ့ကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီအကြောင်းအရာတွေကို သိနေရတာလဲလို့ မေးလိုက်တော့.. ကလေးမလေးက “ Sunday School မှာသင်ပေးတာလေ” ဆိုပြီး ပြန်ဖြေပါတယ်။ အဲဒီစကားကတော့ ကိုယ့်ရင်ဘတ်ထဲကို တည့်တည့်ကြီး ၀င်သွားသလိုပါပဲ။ ကြည့်ပါဦးလေ..ဒီလိုသာမန်ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အသိဉာဏ်ထဲကို ဘာသာရေး ဗဟုသုတတွေ စွဲနေအောင် အများကြီး ထည့်သွင်းပေးနိုင်တဲ့ သူတို့ ရွာကျောင်း Sunday School က ဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို အလွန်လေးစားမိပါတယ်။ ဒီကလေးတွေအတွက် သူတို့ရပ်ရွာက ဘုန်းကြီးတွေ အလွန်တာဝန်ကျေကြတယ်လို့ ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲခံစားရလိုက်ရတယ်။
မွန်းလွဲ၂နာရီကျော်လောက်မှာတော့ ကိုယ်တို့လဲ အဲဒီခြံကြီးကနေ ကိုလံဘိုကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ခြံထဲကမထွက်မီ ကားပေါ်မတက်ခင်လေးမှာတော့ အိမ်ရှင်သမီးလေးက ခြံထဲကပန်းတွေခူးပြီး ပန်းလေးတွေနဲ့ နှုတ်ဆက်ကန်တော့ပါတယ်။ အပြန်လမ်းမှာတော့ လက်ထဲမှာကိုင်ထားတဲ့ ပန်းလေးတွေကိုငေးရင်း နေ့ခင်းက တွေ့ခဲ့တဲ့ စကားပြောခဲ့တဲ့ ပန်းလေးတွေအကြောင်း သတိရနေမိတယ်။ ဒီကပန်းလေးတွေကတော့ လောကကြီးအတွက် အလှဆုံးဖူးပွင့်ကြဖို့ တာစူနေကြပါပြီ။ ကိုယ်တို့နိုင်ငံက ပန်းကလေးတွေကရော……….။ “ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ဟာ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေ လက်ထဲမှာရှိနေပါတယ် ” ဆိုတဲ့စကားကို စာအုပ်တွေထဲမှာ မကြာခဏ ဖတ်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ မျိုးဆက်သစ် ပန်းပွင့်လေးတွေ ခွန်အားအပြည့်နဲ့ လန်းဆန်းမှုအပြည့်နဲ့ ဖူးပွင့်နေတာတွေ့ရရင် တကယ်ကြည်နူးရတယ်။
တစ်ခါတုန်းကတော့ နယ်က ကလေးမလေးတစ်ယောက် သူ့မိသားစုနဲ့ အတူ ကိုလံဘိုကို လာရင်း ကိုယ့်ဆီ အလည်ဝင်လာပါတယ်။ သူလည်း အသက်၁၃နှစ်လောက်ရှိပါပြီး။ (ဒီနိုင်ငံက ကိုယ်ရင်းနှီးတဲ့ ကလေးတွေ ၁၀ယောက်၁၅ယောက်လောက် ရှိတဲ့အထဲမှာ အသက် ၁၃နှစ်အရွယ်က ၄ယောက်ပါတယ်။) ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီကောင်မလေး ကိုယ့်ဆီ လာလည်တဲ့ အချိန်ကလည်း အမေရိကန်သမ္မတလောင်း Barack Obama ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက သတင်းစာတွေ၊ ဂျာနယ်တွေ၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာ ပလူပျံနေတဲ့ အချိန်ပေါ့။ အဲဒါတွေကိုတွေ့တော့ ကလေးမလေးက ကိုယ့်ကိုဘာပြောသလဲဆိုတော့ သူက “ Obamaကို မကြိုက်ဘူး ”တဲ့။ Obama ကို ထောက်ခံသံတွေ ကျွက်ကျွက်ညံနေတဲ့ အချိန်မှာ ဒီကလေးမလေးက မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တော့ ကိုယ့်မှာ စိတ်ထဲဇဝေဇ၀ါဖြစ်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ မကြိုက်တာလဲလို့ သူ့ကိုမေးတော့ သူက “ Hillary Clinton ကို ပိုကြိုက်လို့ပေါ့ ” တဲ့။ ပြီးတော့ သူက Hillary Clinton စကားပြောတဲ့ ပုံစံကို သူအလွန် သဘောကျကြောင်း ကိုယ့်ကိုပြောပြပါသေးတယ်။
အဲဒီလို သူပြောနေတဲ့ ပုံစံကလေးကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်ကတော့ ပြုံးနေမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဆက်ပြောတဲ့ စကားတွေကြောင့် ကိုယ့်မှာဖြင့် အားရပါးရရီလိုက်မိတယ်။ အဲဒါကတော့ သူက Dr. Kondoliza Rice စကားပြောဟန်ကို ကြိုက်ပါတယ်တဲ့..၊ ဒါပေမဲ့ Dr. Rice က နိုင်ငံတကာက ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့ အခါမှာ ခြေထောက်ကို အမြင့်ကြီး ချိတ်ထိုင်တာကိုတော့ သူကမကြိုက်ဘူးတဲ့။ အဲဒီစကားကိုကြားတော့ ကိုယ့်မှာဖြင့် သဘောကျလိုက်တာ။ စဉ်းစားကြည့်လေ ကလေးမလေးတစ်ယောက် (သို့မဟုတ်) လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ TV အစီအစဉ်တွေထဲက ကြော်ငြာမင်းသမီးတွေကို စိတ်ဝင်စားတာထက် လူထုကို ဦးဆောင်နေတဲ့ ပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးနေတဲ့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေကို စိတ်ဝင်စားတာ ပိုမကောင်းဘူးလား..။ ရုပ်ရှင်ထဲက မင်းသမီးတွေ ပြောတဲ့ စကားလုံးတွေထက် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းတွေကို စိတ်ဝင်စားတာ ပိုမကောင်းဘူးလား…။ စတိတ်ပေါ်က မော်ဒယ်လေးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားပုံကို စိတ်ဝင်စားတာထက် ကမ္ဘာကျော်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားပြုမူပုံကို စိတ်ဝင်စားတာ ပိုမကောင်းပေဘူးလား။ ကိုယ့်တူလေး၊ တူမလေးတွေက TV ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲက မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေကို သဘောကျနေချိန်မှာ ကိုယ့်ရှေ့က ကောင်းမလေးကတော့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးကြီးတွေကို အားကျလို့နေတယ်။ ဝေတောင်ဝေဖန် လိုက်သေး။ ကိုယ့်မှာတော့ သူတို့နဲ့ တွေ့လိုက်ရင် စဉ်းစားစရာတွေက ပေါ်ပေါ်လာတော့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ.. သူတို့လေးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရတာဟာ ကိုယ့်အတွက်တော့ အမှတ်ရစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေ ၆၉%က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်၊ ၁၅%က ဟိန္ဒူဘာသာဝင်၊ ၈%က ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်၊ ၇%က မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်တွေ ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာက လပြည့်နေ့တိုင်းကို အစိုးရရုံးပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပေးပြီး အဲဒီနေ့ဆိုရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ ရိပ်သာတွေမှာ ဥပုသ်သီတင်းစောင့်တည်သူတွေ ပြည့်လို့ပေါ့။ ကိုယ်နေတဲ့ ရိပ်သာမှာတော့ ပုံမှန်လပြည့်နေ့ဆိုရင် ဥပုသ်စောင့်တည်သူ ၁၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီး Wesak Poya Day လို့ခေါ်တဲ့ ကဆုန်လပြည့်နေလိုမျိုးမှာဆိုရင်တော့ ၂၀၀၀လောက်ရှိတတ်ပါတယ်။ မနက်၆နာရီလောက်ကတည်းက ရောက်လာကြပြီး ညနေ၅နာရီလောက်မှ ပြန်ကြတာပါ။ တရားပွဲတွေကလဲ ဆက်တိုက်ပါပဲ။ နာမည်ကြီးဆရာတော်တွေကိုလည်း တရားပွဲအတွက် ပင့်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ အဓိကကတော့ သီလယူပြီး တရားနာကြပါတယ်။ အဲဒီသူတွေထဲမှာလည်း ကလေးတွေက အမြဲပါလေ့ရှိပါတယ်။ ဧည့်သည်လာတာ အလွန်ရှားတဲ့ ကိုယ့်အခန်းထဲမှာတော့ လပြည့်နေ့တွေဆိုရင် အထူးဧည့်သည်အဖြစ်နဲ့ ကလေးတွေကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ တဘက်ကလေးတွေပတ်ထားပြီး အထက်အောက် အဖြူရောင်ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ပေါ့။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၆နှစ်လောက်တုန်းက ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ ကိုယ့်မိတ်ဆွေရဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းကို ပြန်ကြားယောင်နေမိတယ်..“ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဘာသာရေးတစ်ခုလို ပုံစံမျိုးနဲ့ ကလေးတွေကို သင်ပေးနေလို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်ဘူး။ ဘာသာရပ်တစ်ခုလို သင်ပေးရမှာ ” လို့ သူ အားရပါးရနဲ့ပြောတုန်းက ကိုယ့်မှာတော့ အဲဒီစကားကို အလွန်သဘောကျပြီး အပြည့်အ၀ထောက်ခံခဲ့ဖူးတယ်။ အခု ဒီနိုင်ငံကို ရောက်ပြီး ဒီက သင်ကြားရေးစနစ်အခြေအနေတွေကို တွေ့လိုက်ရတော့မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း အတော်ရှက်မိပါရဲ့။ ကိုယ်တို့မှာတော့ ထောက်ခံလို့ကောင်းတုန်း ၊ ဆွေးနွေးလို့ကောင်းတုန်း ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာကို ဒီနိုင်ငံက ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း၁၀၀လောက်ကတည်းက လက်တွေ့လုပ်ပြခဲ့ကြတာပါ။ ကိုယ်ကတော့ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဦးညွှတ်ရင်း စာရေးဆရာကြီး ဗန်းမော်တင်အောင်ရဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းကို ကြားယောင်နေမိတယ်.. “ လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဟာ သူဖြတ်သန်းကျော်လွှားနေတဲ့ ခေတ်ကြီးက သူ့ပခုံးပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ သမိုင်းတာဝန်ကို သူဘယ်လောက်သယ်ပိုးထမ်းဆောင်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ တိုင်းတာရမှာပဲ” ။။
Feb9, 2009
(ကမ္ဘာအေးတက္ကသိုလ်နှစ်ပတ်လည် မဂ္ဂဇင်းအတွက် အမှတ်တရ)
၃။ http:// www.localhistories.org/srilanka.html
Posted by linkardipa-ashin at 3:08 PM
ယခင် ဓမ္မစကူးလ်နှင့် ယခု ဆန်းဒေးစကူးလ်
ဘလော့လာ မိတ်ဆွေအပေါင်းကို သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာ ကျင်းပသော ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများကို တင်ပြ မျှဝေပေးလျှက်ရှိရာ ကျန်သေးသည့် မှတ်တမ်းများကိုလည်း ဆက်လတ်တင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ယခုလော လောဆယ်တွင် ဗွီဒီယိုဖိုင်များ ဖြတ်တောက်ကာ အပ်ပလုပ်လုပ်နေရသောကြောင့် အဆက်ပြတ်သလိုဖြစ်သွား သည်ကို တောင်းပန်ပါရစေ.... ကြားဖြတ်အနေဖြင့် မနက်ဖြန်၏ နောင်တော်ကြီး နိုင်ငံကျော်ဓမ္မကထိဆရာ တော် ယခု သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ ဘာသန္တရစာပေများ လေ့လာနေသည့် အရှင်ဒေ၀န္ဒာဘိဝံသကိုယ်တိုင် ခံစား ရေးသားထားသည့် ဗဟုသုတစာပေဆောင်းပါးနှစ်ခုကို ဘလော့လာ စာဖတ်ပရိသတ်များကို မျှဝေခံစားလိုက်ပါ သည်။
``ဣတိပိသော ဘဂ၀ါ ´´ ``သမ္ဗုဒ္ဓေ အဋ္ဌ၀ီသဉ္စ´´ (ဘုရားရှိခိုး)
``လူမိုက်ဆိုလျှင် ရှောင်သွေလွှဲလို့ ၊ မမှီဝဲနှင့် ကင်းအောင်နေ´´ (မင်္ဂလသုတ်)
``အဆိပ်ပြင်းတောက်၊ မြွေဟောက်ကြီးကို၊ ဖားငယ်မများ ကိုက်ဝါးကိုမျို၊ ကညာယူထား သက်ကြားဖိုးအို၊ မယားဆဲ အမြဲအော်ငေါက်သကို´´(ကောသလအိပ်မက်) မိမိတို့ ကျောင်းသားပေါက်စအရွယ်က ညနေ ၇-နာရီ ဘုရားဝတ်တက်အပြီးမှာ ရွာဦးကျောင်း ဘုန်းကြီးကို ၀တ်ဖြည့်ပေးရင်း ဘုန်းကြီးက အထက်ပါအတိုင်း စာတို ပေစများ၊ ကဗျာများ နှုတ်တိုက် ချပေးသည်ကို မိမိတို့ကျောင်းသား ကိုရင်များက အလွတ်လိုက်ဆိုခဲ့ရပါသည်။ တခါတရံ အဖွဲ့လိုက်၊ တခါတရံ တစ်ယောက်ချင်း ဆိုရ၏။ ပြီးမှ ဘုန်းကြီးက ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်များကို ကလေးများ သဘောပေါက်အောင် ရှင်းပြ၏။ ရှေးဟောင်း နှောင်းဖြစ်များ၊ ငါးရာ့ငါးဆယ် လာ ဖြစ်တော်စဉ်များ၊ ရုိုးရာပုံပြင်များကိုလည်း စိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင် ပြောပြ၏။ အချိန်ကား ၁-နာရီ/ ၁-နာရီကျော် ၀န်းကျင်လောက် ကြာမြင့်ပေသည်။ ဤသည်ကား တစ်ညတာ မဟုတ်၊ အလုပ်မရှုတ်လျှင် ညစဉ်ညတိုင်းတည်း။ ထို့ကြောင့် ရွာဦးကျောင်းက ညဉ့်ဦးယာမ်သည် မိမိတို့ ကျောင်းသား ကိုရင်လေးများအတွက် ယနေ့ခေတ်အနေနှင့် ပြောရလျှင် ``ဓမ္မစကူးလ်´´ (Dhamma School) ပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။
ရွာဦးကျောင်းက ဓမ္မစကူးလ်မှာ သင်ယူခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓ၀င်ဆိုင်ရာ အခြေခံစာတိုပေစများက စာပေကို တတ်ချင်၊ ပညာကိုလိုချင်သည့် စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်အောင် နှိုးဆော်ပေးဟန်တူလေ၏။ စာဖတ်ဝါသနာပါသည့် ဖခမည်းတော်ကြီးက လည်း မင်းကွန်းဆရာတော်၏ မဟာဗုဒ္ဓ၀င်စာအုပ်ထဲက ဆရာတော်၏ ဓာတ်ပုံနှင့် ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးများကို ဖတ်ပြပြီး မိမိကို ပြောပြ၏။ ထို့ကြောင့်ထင်၏။ ၁၀-နှစ်သားအရွယ်မှာ ရှင်သာမဏေ၀တ်ပြီး ၁၃-နှစ်အရွယ်မှာ စာပေများ သင်ကြားဖို့အတွက် မုံရွာမြို့ ဇောတိကစာသင်တိုက်ကြီးသို့ ပျော်ပျော်ပါးပါးပင် သွားခဲ့လေသည်။
စာသင်တိုက်ကြီးသို့ရောက်ပြီးသည့်နောက်၌ သဒ္ဒါကြီးစာအုပ်၊ အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟစာအုပ်တို့ကို ကိုင်ဆောင်ပြီး အလွတ် ကျက်မှတ်ရလေသည်။ ထိုသို့ကျက်မှတ်ရင်း အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟစာအုပ်မျက်နှာဖုံးမှာ ရေးသားထားသည့် ``သီဟိုဠ်ကျွန်း အရှင် အနုရုဒ္ဓါမထေရ် စီစဉ်ရေးသားအပ်သော အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟ``ဟူသော စာကိုတွေ့မိသောအခါ ``မိမိတို့နယ်မြို့လေးမှ မုံရွာကို သွားသည့် ကတ္တရာလမ်းလေးကိုပင် အာရှတိုက်၏ အကြီးဆုံးလမ်းမကြီး´´ဟု ထင်ခဲ့သော မိမိသည် ``သီဟိုဠ် ကျွန်းဆိုတာ ဘယ်မှာလဲ၊ တနင်္သာရီတိုင်းမှာလား၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလား´´ဟု မယောင်မလည်နှင့် ၀ိုးတ၀ါး တွေဝေ စဉ်းစားမိခဲ့သည်။ ယင်းသို့စဉ်းစားမိရင်းနှင့်ပင် စာသင်တိုက်မျိုးစုံသို့ သွားရောက်၍ ပရိယတ္တိ စာပေများကို သင်ယူခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူ့အရွယ်နှင့်သူ သတ်မှတ်ထားသည့် စာမေးပွဲမျိုးစုံကို ကြိုးစားပြီး ၀င်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ရင်း အသက် ၂၇-နှစ်သို့ ချဉ်းနင်းရောက်ရှိခဲ့လေသည်။ ``သာမဏေကျော်၊ ဓမ္မာစရိယ၊ သကျသီဟ´´ဟူသော ဘွဲ့များကို လည်း ရရှိခဲ့ပါသည်။
အသက် ၂၇-နှစ်သို့ရောက်သောအခါ ထိုက်သလောက် လေ့လာထားသည့် ဗဟုသုတ၊ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံ၊ အရာရာကို စူးစမ်းတတ်သည့် အတွေးအခေါ်များ သူ့ အရွယ်နှင့်သူ ရင့်ကျက်လာပြီဖြစ်သည်အား လျော်စွာ`` သီဟိုဠ်ကျွန်းဆိုတာ တနင်္သာရီတိုင်းမှာလား၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလား´´ဟူသော ၀ိုးတ၀ါး အတွေးများ စုန်းစုန်း မြုပ် နိဂုံးချုပ်သွားခဲ့လေပြီ။
အတွေးဟောင်းများ ဆွေးမြေ့သည့်အခါ အတွေးသစ်များ သန္ဓေတည်လာရမြဲဖြစ်ရကား ``ဒီပနီကျမ်းပေါင်းများ စွာကို ပြုတော်မူခဲ့ပြီး နွားသားမစားရေးကို တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်ခဲ့သော ကမ္ဘာကျော် လယ်တီဆရာတော်(D.Litt)၊ သီဟိုဠ်ဖြစ် ဋီကာကျမ်းတစ်ဆောင်၏ အမှားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ထောက်ပြ သည့် ပရမတ္ထဒီပနီဟုခေါ်တွင်သည့် မြန်မာပြည်ဖြစ် ဋီကာကျမ်း၊ သူနာပြုအလုပ်ကို လုပ်ရင်း သာသနာပြုခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓသာသနာပြု အရှင်သေဋ္ဌိလ၊ သိရီလင်္ကာနိုင်ငံ သမိုင်း၏ ခေတ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားအဖြစ် ပထမဆုံး ပေါ်ထွက်လာသည့် ရဟန်းတစ်ပါးဟု တနိုင်ငံလုံး ဟိုးဟိုး ကျော်သွားခဲ့ သော ဒေါက်တာ ၀ါလ်ပိုလာရာဟုလာ၊ နယ်ချဲ့တို့ပေါက်ဖွားရာ ဥရောပ၊ နေမ၀င်အင်ပါရာဟု လက်မ ထောင် ခဲ့သည့် အင်္ဂလန်၊ သင်ယူချင်သည့် အတတ်ပညာများကို သင်ယူနိုင်သည့် အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ဌာနချုပ်တည်ရှိရာ အမေရိကန်၊ ပညာရှင်အမြောက်အမြား ထုတ်လုပ်နေသည့် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်၊ အဏုမြူဖခင် သိပ္ပံပညာရှင် အိုင်းစတိုင်း၊ ကျွန်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းသည့် သမ္မတ လင်ကွန်း၊ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် အသက်ကိုပင် စတေးခဲ့သည့် ဂန္ဓီ၊ သန်းပေါင်း များစွာသော အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်အောင် စည်းရုံးနိုင်ခဲသည့် ဒေါက်တာ အမ်ဘေဒကာ´´စသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ထူး၊ ဂန္ထ၀င်စာပေ၊ ကမ္ဘာကျော်တက္ကသိုလ်၊ နိုင်ငံတကာ သမိုင်းဝင် ဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူ B.A M.A Ph.D စသော ဘွဲ့ဒီဂရီများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် အတွေးများသည် ရင်မှာ မသိမသာ ခိုအောင်းမိလေပြီ။
ထို့ကြောင့် ``အရှင်သုမနပါလ B.A (ကိုလံဘို) အရှင်ရေ၀တဓမ္မ M.A (ကေလနိယ) အရှင်ရာဟုလာနန္ဒ Ph.D (ဘုံဘေ)´´ဟု စသည်အားဖြင့် ရေးသားထားသည်များကို တွေ့ရသောအခါ ယင်းနိုင်ငံတကာသုံး ဘွဲ့ဒီဂရီများကို လိုချင်သည့်စိတ်များ ဖြစ်မိလေသည်။
``သာသနဓဇ၊ သိရီပ၀ရ၊ ၀ိဒူ၊ မဟာဝိဒူ၊ ပါရဂူ၊ နိကာယုဇ္ဖောတက၊ ဂန္ထ၀ါစက၊ ဇောတိက ဓဇ´´ စသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သာသနာတော်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့ဒီဂရီများကား လူပုဂ္ဂိုလ်များ နားလည်ဖို့ မဆိုထားဘိ၊ မိမိတို့ ရှင်ရဟန်းများပင် နားလည်အောင် မနည်းကြိုးစားရပေ၏။ လူအများ နားလည်ဖို့အတွက်မှာမူ ``ဘွဲ့တံဆိပ်ဒီပလိုမာတန်း´´ တစ်ခုကိုပင် ဖွင့်ဖို့လိုပေလိမ့်မည်။ B.A M.A Ph.D စသောဘွဲ့ဒီဂရီများက နိုင်ငံတကာသုံး ဘွဲ့ဒီဂရီများဖြစ်သောကြောင့် ကျေးတော သားပင်ဖြစ် စေဦးတော့ ထိုက်သလောက်တော့ နားလည်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းနိုင်ငံတကာသုံး ဘွဲ့ ဒီဂရီများကား လူ့လောကတွင် ရေပန်းစားလှ၏။
ယင်းဘွဲ့ဒီဂရီများကို လိုချင်သည့်အတွက် သီဟိုဠ်ကျွန်းခေါ် သိရီလင်္ကာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်၍ ပညာသင်ယူ ချင်သည့်ဆန္ဒများ ဖြစ်မိလေသည်။ သို့သော် နွားကျောင်းသား တစ်ယောက်အတွက် မြို့တော်ကြီးသည် အလှမ်းကွာဝေး လှသကဲ့သို့ မိမိမှာလည်း အစစအရာရာ အင်အားနည်းနေရကား သီရိလင်္ကာရှိ တက္ကသိုလ်ကြီးများသည် မိမိနှင့် အလှမ်း ကွာဝေးလျက်ပင် ရှိပေသည်။ သို့သော် နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်အိမ်မက်များက မက်နေဆဲ။ ယင်းသို့သောအိပ်မက်များမှာ ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘ၀က နားစွင့်ခဲ့ရသော ရွာဦးကျောင်း ခေါင်းလောင်းသံက စခဲ့ပေသည်။
ယနေ့ အမိမြန်မာပြည်ကြီး၌ ရွာဦးကျောင်းက ခေါင်းလောင်းသံများ မြည်ကြပါသေး၏လော။ နားစွင့်ကြစေချင် ပါသည်။ ယင်းခေါင်းလောင်းသံများကို ဘာသာခြားတို့၏ ဂစ်တာသံများနှင့် ၀တ်ပြုသံများက လွှမ်းမိုးစ ပြုနေပေပြီ။ သတိမူလျှင် မြူတောင် မြင်နိုင်ပေ၏တကား။ နိုင်ငံ့ကျက်သရေ ဆောင်ဖြစ်သည့် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးသာ စကားပြောနိုင်ခဲ့လျှင် ``အော် မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများ ကျောချနေတာတောင် ဓားပြမှန်း မသိကြဘဲကိုး၊ ဒါတောင် သာကီမျိုးဟေ့ တို့ဗမာလို့ အော်ကြတုန်းရှိသေးတယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ တဖြေးဖြေးနဲ့ ပရုတ်လုံးကဲ့သို့ လုံးပါး ပါးနေသည်ကို မသိကြသည်မှာ လက်ဖျစ်ခတ်တီး အံ့ချီးထိုက်ပေစွာ့´´ဟု ငြီးတွားပေလိမ့်မည်။
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည့် မိမိတို့ရဟန်းတော်များသည် ``ကျောင်းသင်္ခန်း´´ မှာပင် ကိန်းအောင်း မနေဘဲ အခြားသူတို့၏ လုပ်ကွက်ကိုလည်း ကျော်၍ ကြည့်တတ်ဖို့ လိုပေသည်။ တစ်ကွက်နောက်ကျလျှင် မိစ္ဆာကျားတို့၏ ၀ါးမျိုခြင်းကို ခံရမည်သာတည်း။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ၀ါးမျိုခံရသည်ကိုပင် ကျားစွယ်ကို ကြောက်ရကောင်းမှန်း မသိသေး။ ထို့ကြောင့် ၀ံသာနုစိတ်ဓာတ် ပြင်းထန်လှသည့် ဆရာတော်တစ်ပါးက ``ငါတို့က ခံစစ်နှင့် ကစားနေရတာပါ၊ ဂိုးသွင်း မခံရအောင် မနည်းကြိုးစားနေရတယ်`` ၀မ်းနည်းသံနှင့် ပြာခဲ့ဖူးပါသည်။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်များ ကင်းဝင်သွားလျှင်တော့ မိမိတို့အားလုံး လည်စင်းခံကြဖို့သာ ပြင်ကြပေတော့။ ကိုယ့်ခြံစည်းရိုးကို လုံအောင်ကာဖို့ ကြိုးပမ်းကြပါစို့။
ယင်းအမြင်ကြောင့်ပင် မိမိသည် ကလေးသူငယ်များအတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှု သင်တန်းများကို မုံရွာ၊ ပခုက္ကူစသည့်မြို့များ၌ ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့ပါ၏။ ကလေးတရားပွဲများကိုလည်း ဟောကြားပေး ခဲ့၏။ ကချင်ပြည်နယ် နမ္မတီးမြို့သို့ သွားရောက်ပြီး ကလေးများကို တရားဟောသည့်အခါ တရုတ်ကြီး တစ်ယောက်က ``လူငယ်ကောင်းမှ လူကြီးကောင်းမှာ၊ လူကြီး ကောင်းမှ တိုင်းပြည်ကောင်းမှာပေါ့၊ ဒါကြောင့် ကလေးများကို တရားဟောသင့်တယ်ဘုရား´´ လျှောက်ထားပြီး ကလေးများအတွက် မုန့်ပဲသွားရေစာနှင့် ဘောလ်ပင် ဗလာစာအုပ်များကို လှူဒါန်းခဲ့လေသည်။ ဤ သည်ကား မိမိဦးစီးပြီး ဟောပြောပို့ချပေးခဲ့သည့် ရက်တို ``ဓမ္မစကူးလ်´´ များပင်တည်း။ အမှန်တကယ်ကား ရေရှည် စီမံကိန်းရေး ဆွဲပြီး ``ဓမ္မစကူးလ်´´များကို ရက်ရှည် ပို့ချသင့်ပေသည်။
တရားဟောသည့်အခါ၌လည်း ဘာသာခြားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး လူမျိုးကိုချစ်သည့်စိတ်၊ ဘာသာကို ချစ်သည့် စိတ်များ ထားရှိကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက် စီးပွားရေး ဖြစ်ထွန်းအောင်လုပ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း လောကီကြီးပွားရေးတရားများကို ဦးစားပေးဟော၏။ ရှင် ရဟန်းများ သင်ယူနေကြသည့် ပရိယတ္တိ ပညာရေးစနစ်ကိုလည်း ခေတ်နှင့် အညီ ပြုပြင်သင့်ကြောင်း ဝေဘန်အကြံပြု၏။ ရေး၏။ ယင်းသို့သော လုပ်ရပ် များကြောင့်ပင် ပတ်ဝန်းကျင်၏ အားပေး ထောက်ခံမှုများကို ထိုက်သလောက် ရရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော် မပြောပ လောက်သေးပါ။
ဆန်းဒေးစကူးလ် (Sunday School)
မိမိသည် အသက် ၃၅-နှစ်ကျော်သောအခါမှသာ အနှစ်နှစ်အလလက အိပ်မက်မက်ခဲ့သည့် သီဟိုဠ်ကျွန်းခေါ် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသို့ ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပါတော့သည်။ ကိုလံဘိုနိုင်ငံတကာလေဆိပ်သို့ ရောက်ရောက်ချင်း လေဆိပ်အတွင်း၌ ဘုရားဆင်းတုတစ်ဆူကို ဖူးမျှော်ရ၏။ ထို့နောက် လမ်းတလျှောက် လမ်းဆုံလမ်းခွများ၌လည်း ဘုရာဆင်းတုများ၊ ဗောဓိပင်များကို တွေ့ရပြန်၏။ ဗောဓိပင်များကိုလည်း အထူးတလည် အမြတ်တနိုးထားကြ၏။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသားများ၏ မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ် တလေးတစား တန်ဖိုးထားသည့် စိတ်ကို အားရ ကျေနပ်မိပါသည်။
အစိုးရရုံးးများ၌လည်း ရဟန်းတော်များကို အထူးဦးစားပေး၍ လုပ်ပေးကြ၏။ တခါတရံ အစိုးရရုံးသို့ နေ့ဆွမ်း စားချိန် ရောက်သွားလျှင် ဆွမ်းတောင် ကပ်လှူလိုက်သေးပါသည်။ ဘတ်စ်ကားများ၌လည်း ရဟန်း သံဃာတော်များ အတွက် အမြဲတန်း ၂-နေရာစာ ပေးထားသည်ကို တွေ့ရပြန်၏။ ဂိတ်စောင့် ရဲဘော်များသည် ဘုန်းကြီးရဟန်းများကို တွေ့လျှင် ပရိတ်ချည်ကို တောင်းလေ့ရှိ၏။ ရဟန်းတော်များ ပါဝင်သောကားများကို စစ်ဆေး မေးမြန်းခြင်း မလုပ်ဘဲ အလွယ်တကူပင် ခွင့်ပြု၏။ အစိုးရရုံးများကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များကို ဦးစားပေး နေရာချ၏။ ဥပုသ်စောင့်ချင်သူများ ဥပုသ်စောင့်နိုင်ဖို့အတွက် လပြည့်နေ့တိုင်းကို အစိုးရရုံးပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထား၏။ ညနေခင်းဆိုလျှင် ဘုန်းကြီး ကျောင်းများ၌ ဗောဓိပင်ကို ပန်းဆီမီးတို့ဖြင့် ပူဇော်ကြ၏။ ဤသည့်ဖြစ်စဉ်များက သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏ မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ် အလေးအနက်ထားကြောင်း ဖေါ်ပြလျက်ရှိပေသည်။
ထို့အပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံတိုင်း နမူနာယူသင့်သော စည်းမျဉ်းတစ်ခုရှိပါသေးသည်။ ယင်းမှာအခြားမဟုတ်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏ အာဏာ အရှိဆုံးဖြစ်သော သမ္မတတစ်ယောက်သည် သမ္မတဖြစ်သည်နှင့်တပြိုင်နက် သမ္မတအဖြစ် ``ကျမ်းသစ္စာ´´ ကျိန်ဆိုရ၏။ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပြီးသော သမ္မတအသစ်သည် အနုရာဓပူရမြို့ရှိ မဟာဗောဓိပင်နှင့် ကန္ဒီမြို့ရှိ စွယ်တော်တို့ကို ဦးတိုက်ပူဇော် ရခြင်း၊ သံဃာ့ဂိုဏ်း ၃-ဂိုဏ်းမှ ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးတို့ကို ဦးတိုက်ပူဇော်ရ ခြင်းတို့ပေတည်း။ ဤကား မဖြစ်မနေ လုပ်ကိုလုပ်ရမည့် စည်းမျဉ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
``အရင်းစစ်လျှင် အမြစ်မြေက´´ ဆိုသကဲ့သို့ ယင်းသို့လျှင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးက မိမိတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အသက် တမျှ တန်ဖိုးထားခြင်း၏အကြောင်းမှာ သိရီလင်္ကာနိုင်ငံအစိုးရ၏ ဆန်းဒေးစကူးလ်များကြောင့်ပင် ဖြစ်ပေသည်။ ယင်း ဆန်းဒေးစကူးလ်ကို ၁၈၈၁-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃-ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသား Henry Olcott ဟင်နရီအောလ်ကော့ (သာသနာ့အလံကို တီထွင်သူ)က အခက်အခဲပေါင်းများစွာကို ကျော်လွှားပြီး ကိုယ့်အားကိုယ့်ကိုးဖြင့် စတင်၍ တည်ထောင် ခဲ့ပါသည် (On 13th February 1881, the first Buddhist Sunday school was started at the Society’s premises in Maliban Street )။ နောက်ပိုင်းကျမှ နိုင်ငံတော်အစိုးရက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လေသည်။ ယခုဆိုလျှင် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀-ကျော် သွားပေပြီ။ ယနေ့တိုင်းပြည်၌ အုပ်ချုပ်နေကြသည့် သမ္မတ၊ ၀န်ကြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများသည်ပင် ယင်းဆန်းဒေးစကူးလ် ကျောင်းဆင်းများ ဖြစ်ကြပေသည်။
ဆန်းဒေးစကူးလ် ဟူသည်မှာ တနင်္ဂနွေနေ့ တိုင်း ဗုဒ္ဓ၀င်၊ ရာဇ၀င်၊ ယဉ်ကျေးမှုစသည်များကို အထူးသင်ပေးသော ကျောင်းဖြစ်ပေသည်။ ယင်းကျောင်းများသည် ပုဂ္ဂလိကပိုင် မဟုတ်ကြ၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုယ်တိုင်က ပညာရေးစနစ်ကို သတ်မှတ်ပေးပြီး စည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်အညီ ဖွင့်လှစ်ထားသော ကျောင်းများ ဖြစ်ပေသည်။ နေရာကား ဘုန်းကြီးကျောင်းများ ပင်တည်း။ အချို့ဘုန်းကြီး ကျောင်းများ၌ စွမ်းနိုင်သော ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးများသည် ဆန်းဒေးစကူးလ်၏ ကျောင်းအုပ် ဖြစ်ပြီး အနည်းငယ်သောကျောင်းများမှာတော့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးများက ပံ့ပိုးမှု အပိုင်းလောက်သာ တာဝန်ယူ ကြပါ သည်။ ဤအချက်ကို ထောက်ဆ၍ ကလေးသူငယ်များကို သင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဘုန်းကြီးများကိုယ်တိုင်က လောကီ လောကုတ် စွယ်စုံတတ်ဖို့လိုသည်ဆိုသည်ကို သတိမူသင့်၏။
ယင်းဆန်းဒေးလ်ကျောင်း၌ လူပုဂ္ဂိုလ်များ ဆရာ, ဆရာမ ဖြစ်ဖို့အတွက် ဆရာဖြစ်သင်တန်းဟူသော သီးသန့် စာမေးပွဲတစ်ခုကို ဖြေဆိုကြရသေး၏။ ယင်းစားမေးပွဲကို အောင်မြင်မှသာ များသောအားဖြင့် ဆရာဖြစ်ကြပါသည်။ ဆန်းဒေးစကူးလ်၌ သင်ပေးကြသော ဆရာ/ ဆရာမတို့သည်ကား စေတနာ့ဝန်ထမ်းတို့သာတည်း။
၁။ ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံ၊ ကုသိုလ် အကုသိုလ်ကံတို့၏ အကျိုးတရား၊
၂။ ခန္ဓာ၊ အာယတန၊ ဓာတ်၊ သစ္စာ၊
၂။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ၊ သမထ ၀ိပဿနာတို့ဖြစ်ပါသည်။
သိရီလင်္ကာနိုင်ငံရှိ ကလေးသူငယ်များသည် အစိုးရကျောင်းများ၌ ၅-နှစ်အရွယ်မှ စတင်ပြီး ပညာသင်ယူရ သကဲ့သို့ ဆန်းဒေးစကူးလ်၌လည်း (၅)နှစ်အရွယ်မှပင် စတင်ပြီး ပညာသင်ယူကြရပြီး ဆန်းဒေးစကူးလ်ကို အစိုးရကျောင်း များနှင့် တူညီစွာပင် အတန်းများကို သူ့အဆင့်နှင့်သူ ခွဲခြားထားပါသည်။ အစိုးရကျောင်းများက သူငယ်တန်းဆိုလျှင်လည်း ဆန်းဒေးစကူးများမှာလည်း သူငယ်တန်းပင်ဖြစ်သည်။
ဆန်းဒေးစကူးလ်ကို - - -
၁။ သူငယ်တန်း (primary)၊
၂။ ၁-တန်းမှ ၁၀-တန်း (Grade 1 to Grade 10)၊
၃။ နောက်ဆုံးအဆင့် ၁၊ အဆင့်၂ (final 1. 2) ဟု အတန်းပေါင်း ၁၃-တန်း ခွဲခြားပြီး သင်ကြားပေးပါသည်။
ပြဋ္ဌားန်းထားသည့် စာပေများမှာ ငါးရာ့ငါးဆယ်လာ ဇာတ်တော်များ၊ ဓမ္မပဒလာ ဘုရားလက်ထက်က အဖြစ် အပျက်များ၊ ယင်းအကြောင်းကို ရေးထားသည့် ကဗျာများ၊ ပါရမီ ၁၀-ပါး အကြောင်း၊ ဒါန သီလစသော ပုညကိရိယ၀တ္ထု ၁၀-ပါးတို့၏ အဓိပ္ပါယ်၊ ဘုရားဖြစ်တော်စဉ် ဗုဒ္ဓ၀င်အကြောင်း၊ ပရိတ်ကြီးပါဠိနှင့် အဓိပ္ပါယ်၊ အဘိဓမ္မာ သဘောအဓိပ္ပါယ်၊ သုတ္တနိပါတပါဠိလာ မှတ်သားဖွယ်တရားများ၊ သီရိလင်္ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သက်သည့် ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု ဗိသုကာအကြောင်း၊ ရှေးဘုရင်တို့၏အောင်ပွဲနှင့် စစ်သူကြီးများ၏ အစွမ်းသတ္တိစသည်တို့ကို ဖေါ်ပြထားသည့် ရာဇ၀င်များ ၊ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ ကွဲပြားခြားနားပုံတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းပြဋ္ဌာန်းစာတို့ကို အတန်း အားလျော်စွာ သူ့အဆင့်နှင့်သူ ခွဲခြားပြီး သင်ကြားပေးပါသည်။
ယင်းပြဋ္ဌာန်းစာတို့ကို မိခင်ဘာသာဖြစ်သည့် ဆင်ဟာလဘာသာနှင့် သင်ကြားပေး၏။ အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်း သင်ပေး၏။ တချို့ဆန်းဒေးစကူးတို့၌ အင်္ဂလိပ်စာဒီပလိုမာတန်းကိုပင် ဖွင့်လှစ်ထား၏။ အတန်းတိုင်းအတွက် သင်ရိုးပြဌာန်း စာအုပ် တွေကိုလည်း သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပြီး အခမဲ့ဖြန့်ဝေ၏။ ယင်းဆန်းဒေး စကူးလ်စာမေးပွဲကို သာသနာရေးဝန်ကြီး ဌာနကပင် တာဝန်ယူပြီး ဒီဇင်ဘာလ ပထမပတ်မှာ ကျင်းပပေးပါသည်။
ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများသည် တနင်္ဂနွေနေ့ရောက်ပြီဆိုလျှင် နံနက် (၇) နာရီလောက် မှစပြီး ကျောင်းသို့ လာကြ၏။ ကျောင်းတက်သည့်အခါ အထက်အောက် နှစ်ခုစလုံး အဖြူရောင်ဝတ်စုံများကို ရိုးရာဓလေ့အတိုင်း ၀တ် ဆင်ကြရ၏။ အကြောင်၊ အကျား အရောင်မျိုးစုံနှင့် ခေတ်ဆန်ဆန်အ၀တ်အစားများကို မ၀တ်ကြရပါ။ နိုင်ငံတော် အစိုးရကလည်း SundaySchool ၀တ်စုံဆိုပြီးတော့ သီးသန့်သတ်မှတ်ပေးထား၏။ ယောက်ျားလေးများအတွက် လည် ကတုံး လက်ရှည် ရှပ်အင်္ကျီအဖြူနှင့် လုံချည်အဖြူဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးများအတွက်မှာ Halfဆာရီဆိုသည့် ရိုးရာ အဖြူဝတ်စုံ ဖြစ်ပါသည်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ရှေးဦးစွာ ရောက်ရှိလာကြသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများက ကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိ ပန်းပင်များမှ ပန်းများကို ခူး၊ ပြီးတော့ ရေးဆေးကြ၏။ တချို့က မိမိတို့အိမ်မှပင် ပန်း၊ အမွှေးတိုင်၊ ဖယောင်း တိုင်တို့ကို ယူဆောင်ခဲ့ကြ၏။ ယင်းပန်း၊ အမွှေးတိုင်၊ ဖယောင်းတိုင်၊ သောက်တော်ရေစသည်တို့ကို ဗောဓိပင်အနီးရှိ ပန်းတင်ခုံပေါ်မှာ စီထားကြသည်။
စာသင်ခန်းသို့ မ၀င်မီ နံနက် ၈-နာရီ ၃၀ မိနစ်မှာ သြ၀ါဒခံယူပွဲကို ကျင်းပသေး၏။ ကျောင်းသူကျောင်းသား အားလုံး ဗောဓိပင်ရှေ့မှာ စီတန်းပြီး အတန်းလိုက် ရပ်ကြရ၏။ အလှည့်ကျဖြစ်သည့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသား ၁၀-ယောက်၊ ၁၅-ယောက်ခန့်က အမွှေးတိုင်၊ ပန်းခြင်းတို့ကို တန်းစီ ယူဆောင်လာပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားတို့အား တစ်ယောက်ချင်း လက်နှင့် ထိစေ၏။ ပြီးမှ ဗောဓိပင်ရင်းရှိ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ရှေ့မှာ ပူဇော်ကြပါသည်။
ထိုသို့ ဘုရားကို ပူဇော်ပြီးသောအခါမှသာ ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေသည့် ရဟန်းတစ်ပါးပါးထံ ငါးပါးသီလကို ခံယူဆောက်တည်ကြပါသည်။ ထို့နောက် ရဟန်းတော်နှင့် ကျောင်းအုပ်ဆရာက ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို သြ၀ါဒ စကားများကို ပြောကြားပါသည်။ (ယင်းသြ၀ါဒခံယူသည့် အခန်းအနားမှာ အချိန် ၄၅-မိနစ်ခန့်လောက် ကြာ၏။) ပြီးမှ စာသင်ခန်းအတွင်းသို့ ၀င်၍ စာသင်ကြရပါသည်။
နေ့မွန်းတည့်ခါနီး ၁၁- နာရီအချိန်မှာ အားလပ်ချိန် ၁၀-မိနစ်ခန့် အနားပေးပြီး ပေါင်မုန့်၊ လက်ဘက်ရည်စသော မုန့်ပဲသွားရေစာတို့ကို ဝေငှပါသည်။ ထိုမုန့်ပဲသွားရေစာများကို အလှူရှင်ရှိလျှင် အလှူရှင်က၊ အလှူရှင်မရှိလျှင် ကျောင်း ထိုင်ဘုန်းကြီးများက ကျွေးမွေးကြပါသည်။ ထို့နောက် စာသင်ခန်းသို့ ပြန်ဝင်ကြပြီး နေ့လည် ၁၂-နာရီ မိနစ် ၃၀-အချိန်ကျမှ သင်ကြားမှုအစီစဉ်အားလုံး ပြီးဆုံးသွားပါသည်။
သင်တန်းပြီးဆုံးချိန်မှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည် စာသင်ခန်းထဲမှပင် ဗောဓိပင်ရှိရာဘက်ကို မျက်နှာမူပြီး ရှေးဦးစွာ မေတ္တာပို့၊ ထို့နောက်မှ ဗောဓိပင်ကို ပူဇော်ကြရပါသည်။ ယင်းသို့ ပူဇော်ပြီးသောအခါမှသာ စာသင်ခန်းတွင်းမှ အားလုံး ထွက်ခွါကြရပါသည်။
သိရီလင်္ကာရှိ ကလေးများသည် ဤကဲ့သို့ ဘုရားရှိခိုး၊ သြ၀ါဒခံယူ၊ ဗုဒ္ဓစာပေများကို သင်ကြရသည်မှာ တစ်ပတ် မဟုတ်၊ တစ်လမဟုတ်၊ တစ်နှစ် မဟုတ်၊ နှစ်ပေါင်း ၁၃- နှစ်။ ယင်းကဲ့သို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဗုဒ္ဓတရားနှင့် ထိတွေ့ နေကြရကား ကလေးများ၏ ဘာသာကိုချစ်တဲ့စိတ် လူမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်မှာ ဦးခေါင်းထဲမှာ သံမှိုနှက်သကဲ့သို့ ဆွဲမြဲသွား ပါတော့သည်။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ၏ အခြေခံ အုတ်မြစ်မှာလည်း ခိုင်မာသွားပါတော့သည်။
ကလေးများသည် ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် ဆရာများ၏ သြ၀ါဒများကိုလည်း နာယူကြရကား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကျင့်ဝတ်ကိုလည်း ကျွမ်းကျင်၏။ ဗုဒ္ဓ၀င်ကို သင်ကြားထားကြရကား ဘုရားဖြစ်စဉ်နှင့် ဘုရားလောင်း စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း ခရေစေ့တွင်းကျ သိ၏။ သမိုင်းဖြစ်စဉ်တို့ကိုလည်း မှတ်သားကြရ သောကြောင့် အမျိုး ဘာသာ သာသနာကိုလည်း ချစ်၏။ ထိုအကြောင်းများကြောင့် ကလေးသူငယ်များ၏ ဘာသာသွေးကား ရဲရဲတောက် နေပေပြီ။ အဘယ်ကဲ့သို့သောသူမှ ဘာသာကူးပြောင်းအောင် မစွမ်းနိုင်တော့ပေ။
ထို့ကြောင့် သီရိလင်္ကာ၌ နှစ်ပေါင်းများစွာနေဖူးသော မြန်မာဘုန်းကြီးတစ်ပါးက ဤကဲ့သို့ ပြောဖူးလေသည်။ ``သိရိလင်္ကာရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကလေးသူငယ်များဟာ ဘာသာပြောင်းတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကလေး ဘ၀က စတင်ပြီး အခြေခံ ဗုဒ္ဓစာပေများကို စနစ်တကျ သင်ယူခဲ့ရသည့်အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တန်ဖိုးကို ကိုယ် ကိုယ်တိုင် သိရှိနေကြပြီလေ၊ ဒီတော့ ကိုယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဘယ်သောအခါမှ ကျောမခိုင်းတော့´´တဲ့။
နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို ဆန်းဒေးစကူးလ်သို့ မဖြစ်မနေ တက်ရောက် သင်ကြားကြရမည်ဟု စည်းမျဉ်းထုတ်ထား၏။ အလွန်ကောင်းသော စည်းမျဉ်းတည်း။ ယင်းဆန်းဒေးစကူးလ် ကို နိုင်ငံ့အကြီးအကဲ သမ္မတတိုင်းက အားပေးကြပါ၏။ ယခုလက်ရှိ သမ္မတ Mahinda Rajapaksha က ပို၍ အားပေး၏။
ယင်းဆန်းဒေးစကူးလ် အောင်လက်မှတ်ကိုလည်း အထူးဦးစားပေး၏။ အစိုးရရုံးများ၌ အလုပ်လျှောက် သူတို့ သည် ထိုဆန်းဒေးစကူးလ် အောင်လက်မှတ်ကို ပြကြရပါသည်။ အကယ်၍ မပြနိုင်လျှင် အလုပ်ရရှိဖို့ မလွယ်ကူပေ။ တချို့ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများသည်ပင် ယင်းအောင် လက်မှတ်မရှိလျှင် လုံးဝ လက်မခံပေ။ ဆန်းဒေးစကူးလ် အောင်လက်မှတ်မှာ ဤမျှလောက် အရေးပါလှပါသည်။
လှည်းဝင်ရိုးသံ တညံညံ၊ ဓမ္မစကူးလ်ပေါင်း
``လှည်းဝင်ရိုးသံ တညံညံ ပုဂံဘုရားပေါင်း``ဟုကြွေးကြော်နေသည့် အမိမြန်မာပြည်ကြီး၌ စနစ်တကျ ပို့ချနေသော ဓမ္မသင်တန်းကျောင်းများ မည်မျှလောက်ရှိသနည်း၊ အကဲခတ်ကြည့်စေချင်ပါသည်။ တချို့နေရာများ၌ ရက်တိုသင်တန်းကျောင်းများကတော့ ထင်ထင်ရှားရှား ရှိပေသည်။ သို့သော် ရက်ရှည်သင်တန်းကျောင်းများကား နည်းပါးလှ၏။ ယင်းသို့နည်းပါးလှသည့်အတွက် တချို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရင်သွေးငယ်များသည် ဘာသာရေး အခြေခံ အားနည်းကြရကား ဘာသာခြားနှင့် အိမ်ထောင်ပြုပြီး ဘာသာခြားဘက်သို့ ကူးပြောင်းသွားကြသည်ကို ၀မ်းနည်းစွာ တွေ့ခဲ့ရဖူးပါသည်။
စေတီပုထိုးများ၌ ညောင်ပင်ပေါက်လျှင် စေတီပုထိုးများ ပြိုပျက်ကြသကဲ့သို့ မိမိတို့မြန်မာ ပြည်ကြီး၌ ဘာသာ ခြားများ တိုးပွားလာလျှင် စေတီပုထိုးများ မျက်နှာတော် ညှိုးတော်မူရမည့်အခြေ အနေနှင့် ရင်ဆိုင်ရပေမည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကို အစဉ်တွေးလျက် ယခုအချိန်မှစပြီး ဓမ္မသင်တန်းကျောင်း (သို့မဟုတ်) ဓမ္မစကူးလ်များကို မိမိတို့ တတ်စွမ်းသမျှ ဖွင့်လှစ် တည်ထောင်သင့်လှပေသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ၀ံသာနုစိတ်ဓာတ် ကိန်းအောင်းနေသည့် ဒကာကြီး တစ်ယောက်က ``တပည့်တော်တို့ရပ်ကွက်မှာ တပည့်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုံးက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်က ရာခိုင်းနှုန်း ၈၀- လောက် ရှိတယ်၊ အခုကြတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်က ရာခိုင်းနှုန်း ၃၀-လောက်ပဲ ရှိပြီး ဘာသာခြားတွေက ပိုများနေတယ်ဘုရား``ဟု မိမိကို လျှောက်ထားဖူးပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့ တော်ကြီး၌ ဤကဲ့သို့ဖြစ်နေသော ရက်ကွက်များ မည်၍မည်မျှလောက် ရှိနေဦးမည်မသိ။ သေချာမှုရှိသည်ကတော့ ဘာသာခြားများ တိုးပွားလာနေခြင်းပင်တည်း။
ထို့ကြောင့် ဤအချက်ကိုကောင်းကောင်းသိရကား မြန်မာပြည်အနာဂတ်အရေးကို သွေးအေးအေး မနေတတ် သည့် အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီးက ဤကဲ့သို့ မှာတမ်းတော် ခြွေခဲ့ပါသည်။
`` ဒို့မြေဌာနီ ရှေးခါဆီဝယ်၊ မထေရ်အပေါင်း၊ စံရာကျောင်းမှ၊ ငြိမ့်ညောင်းသာယာ၊ မိန့်အာဏာ ကို၊ ရပ်ရွာလူများ၊ လွန်လေးစားခဲ့၊ ခုကားသို့နှယ်၊ မဟုတ်ကွယ်၍၊ နယ်ပယ်ပေါက်ဖွား၊ အမျိုးသားတို့၊ ဘုန်းဘုရား ကျောင်းတွင်၊ စာမသင်တော့။
ဤသည့်တိုင်းသာ၊ နှစ်ပေါင်းကြာလျှင်၊ မြန်မာတိုင်းဖွား၊ အမျိုးသားတို့၊ ဘုရားကိုစွန့်၊ တရားစွန့် ၍၊ စွန့်လိမ့်မှန်စွာ၊ မြတ်သံဃာတည်း၊ သို့အတွက်များပြား၊ ဘုန်းဘုရားတို့၊ တရားကိုယ်ကျင့်၊ လုံအောင်ကျင့်၍၊ မလင့်စေရ၊ ကိုယ့်ဒေသ၌၊ သိပ္ပ၀ိဇ္ဇာ၊ ပြသင့်ရာကို၊ ကောင်းစွာပိုင်ပိုင်၊ ပြသနိုင်မှ၊ ဘုန်းလှိုင်ဟောပြ၊ သြ၀ါဒကို၊ စိတ်ကကြည်ဖြူ၊ လိုက်နာယူလျက်၊ ကိုယ်မူနှုတ်ပြောင်း၊ စိတ်လည်း ကောင်း၍၊ နောက်နှောင်းသာသနာ၊ ပြည်မြန်မာသည်၊ ရှည်ကြာနေသို့၊ ထွန်းမည်ကို့´´။
အကြင်အခါ၌ မြန်မာပြည်အ၀ှမ်းမှာ ``လှည်းဝင်ရိုးသံ တညံညံ၊ ဓမ္မစကူးလ်ပေါင်း´´ဟု ကြွေးကြော်နိုင်၏။ ထို အခါ၌ နတ်ရွာစံသွားလေပြီဖြစ်သော ဘုရင်မင်းမြတ် အနော်ရထာက အထက်ကောင်းကင်ယံ နတ်ပြည်မှတဆင့် ဗြဟ္မာ့ပြည်တိုင်အောင် ``အိုသူတော်ကောင်းတို့ မြန်မာပြည်ကြီးကို ကြည့်ကြကုန်လော၊ အရှင်အရဟံရဲ့သြ၀ါဒကိုခံယူပြီး ငါကိုယ်တော်တိုင် ချခဲ့တဲ့ ဓမ္မအုတ်မြစ်ပေါ်မှာ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူများဟာ ကြီးမားသော ဓမ္မအဆောက်အဦးကြီးကို အဆင့်ဆင့် တည်ဆောက်နေကြတယ်ကွယ်၊ ငါကိုယ်တော် အားရကျေနပ်လှပါဘိ၊ ဒါမှ ဒို့တိုင်း ဒို့ပြည်၊ ဒို့မြန်မာပြည် ဖြစ်ပေသကွယ်``ဟု အားရပါးရ ကောင်းချီးနုမော် သာဓုခေါ်နေမည်မှာ မြေကြီး လက်ခတ် မလွဲသာတည်း။
(၀၁၊ ၀၆၊ ၂၀၀၉)
(မိမိသည် ဤဆောင်းပါးကို ကိုလံဘိုမြို့ SriJayatiladaramayaကျောင်းမှ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသား အရှင်ဓမ္မနန္ဒကို မေးမြန်း၍လည်းကောင်း၊ http://en.wikipedia.org/ wiki/ Buddhism_in _Sri_Lanka/ နှင့် http://www.bps.lk/wheels_library/wh_281.html#_Toc159679743 ဟူသော Website ကို ကြည့်၍လည်းကောင်း မှတ်တမ်းတင်ပြီး ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးကို မည်သည့်စာစောင် မဂ္ဂဇင်း၌မဆို ထည့်နိုင်ပါသည်။)
Posted by linkardipa-ashin at 1:07 AM
ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာစတင်တည်ထောင်သောနေ့ (သို့) မဟာသမယအခါတော်နေ့
ဒီနေ့ဟာ နယုန်လပြည့်နေ့ ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် နှစ်ပေါင်း(၂၅၀၀)ကျော်လောက်က အဖြစ်အပျက်တခုကိုတော့ ခပ်ရေးရေးမေ့နေလောက်ပြီထင်လို့ ဦးဇင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဟာ မဟာသမယ အခါတော်နေ့ပါ။ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောနေ့လို့ခေါ်ရမှာပေါ့။ မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်က ကပိလ၀တ်နဲ့ ကောလိယ နှစ်ပြည်ထောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာ ရောဟဏီမြစ်ရေကိုအကြောင်းပြုပြီး တစ်ပြည်နဲ့ တစ်ပြည် စစ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်ဖို့ စိုင်းပြင်းနေကြတာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ မိုးခေါင်ရေရှားတဲ့အချိန်ကာလနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ ရောဟဏီမြစ်ရေတောင်ခန်းခြောက်လုနီးပါးဖြစ်နေပါပြီ။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အလွန်အင်မတန် ရေလိုအပ်နေလို့ အသက်ကိုတောင်ပဓာနမထားဘဲ ရေအတွက်နဲ့ စစ်တိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြတော့တာပါ။ တကယ်တမ်း ဆန်းစစ်ကြည့်ရင် ကပိလ၀တ်နဲ့ ကောလိယဆိုတာ တကယ့်ဆွေမျိုးတိုင်းပြည်တွေပါ။ ရန်ဖြစ်ကြပြီ ဆိုကတည်းက ဟိုဘက်နဲ့ ဒီဘက် ငယ်ကျိုး ငယ်နာတွေဖော်ပြောပြီး စကားနာထိုးကြတာ သဘာဝပေါ့လေ။ သူတို့လည်း ဒီအတိုင်းပါဘဲ။ သူရသင့်တယ် ငါရသင့်တယ် စသည်ဖြင့် စကားစစ်ထိုးရင်းကနေ စစ်တိုက်ဖို့အခြေအနေထိ ရောက်ရှိလာတော့တာပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ မြတ်စွာဘုရားရှင် ရောက်ရှိတော်မူလာပြီး ဒုတ် ဓား လက်နက်တွေကို ဘာ့ကြောင့်သယ်ဆောင်လာကြသလဲလို့ မေးတော်မူပါတယ်။ ရေအတွက် စစ်တိုက်ဖို့ သယ်ဆောင်လာကြပါတယ်ဘုရားလို့ဖြေတာပေါ့။ ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားက ရေ နဲ့ လူ့အသက်ဟာ ဘယ်ဟာက ပိုပြီးတန်ဖိုးကြီးမားသလဲလို့မေးတော်မူပြန်ပါတယ်။ လူ့အသက်ကပိုပြီးတန်ဖိုးကြီးကြောင်းကို လျှောက်ထားတော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်က တန်ဖိုးမရှိတဲ့ရေအတွက်နဲ့ တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ လူ့အသက်တွေကို မဆုံးရှုံးသင့်တဲ့အကြောင်းကို ဟောပြောပြသ ဆိုဆုံးမတော်မူခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပြည်ထောင်မင်းသားတွေဟာ မြတ်စွာဘုရားဆိုဆုံးမနေချိန်မှာ ဒုတ် ဓား လက်နက်တွေကိုချပြီး ``သူတို့လာပြီးသတ်လဲ ဒို့ အသေခံလိုက်မယ်´´ ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ တရားနာယူကြပါတယ်၊ တဖက်နဲ့ တဖက် အဲဒီလိုအတွေး ကိုယ်စီနဲ့ တရားနာကြတာပါ။ အဆုံးမှာတော့ နှစ်ပြည်ထောင်ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီး ကပိလ၀တ်ဘက်မှ မင်းသား (၂၅၀) ကောလိယဘက်မှ မင်းသား (၂၅၀)စီ မြတ်စွာဘုရားအထံတော်မှာ ရဟန်းပြုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီရဟန်းတော်တွေဟာ သာသနာ့ဘောင်မှာမပျော်ပိုက်ဘူးဆိုတာကို မြတ်စွာဘုရားသိတော်မူတာနဲ့ ဟိမဝန္တာတော အတွင်းက အလွန် မွေ့လျော်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ကုဏ္ဍလာအိုင် သို့ခေါ်ဆောင်ကာ ဂါထာသုံးရာဖြင့်တန်ဆာဆင်အပ်သော--ကုဏ္ဍလငှက်မင်းရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းကိုဟောကြားတော် မူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဇာတ်တော်အဆုံးမှာ ရဟန်း(၅၀၀)ဟာ သောတာပတ္တိဖိုလ်တည်တော်မူကြပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟာ ရဟန်းတော် (၅၀၀)နဲ့အတူ ကပိလဝတ် ပြည်ရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ မဟာဝုန်တော ကို ကြွချီတော်မူခဲ့ပါတယ်။ မဟာဝုန်တောမှာဘဲ သင့်တော်ရာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပေးတော့ မကြာမြင့်တဲ့ကာလအတွင်းမှာ အရဟတ္တဖိုလ် ကို ဆိုက်ရောက် တော်မူကြပါတယ်။ အဲဒီရဟန်း(၅၀၀)တို့ဟာ မိမိ တို့ရရှိထားတဲ့ တရားထူးကို လျှောက်ထားဘို့အတွက် နဲ့ ဘုရားရှင်ကို ဖူးမျှော်ရန်အတွက် နယုန်လပြည့်ညချမ်း မှာ စုရုံးရောက်ရှိ လာကြပါတယ်။ အဲလိုထူးခြားစွာ ကြည်ညိုဖွယ် ရာသံဃာ့ အစည်းအဝေးကို တွေ့မြင် ဖူးတွေ့ ကြည်ညိုလိုကြကုန်သော နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ အသုရာ၊ ဂဠုန်၊ နဂါးတို့ တွေဟာ မဟာဝုန်တော ကို စုရုံးရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ အဲလို ပရိသတ်တွေစုဝေးတဲ့အချိန်မှာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ တရားနာရောက်ရှိလာသော နတ်၊ ဗြဟ္မာ တွေရဲ့ အမည် အမျိုးအနွယ်တို့ကို ရဟန္တာ(၅၀၀)နှင့် နတ်ဗြဟ္မာများကို သိစေလိုတဲ့အတွက် အမျိုးတူအလိုက်စုပေါင်းကာ အမျိုးအနွယ်တစ်ခုချင်းစီကို ဖော်ထုတ်ပြီး နှုတ်ခွန်းဆက်စကား မိန့်ကြားတော်မူပြီးမှသာ မဟာ သမယသုတ်တော်ကြီးကို ဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နတ်၊ ဗြဟ္မာတွေရဲ့အမည်တွေကို နှုတ်ဆက်စကားမိန့်ကြားတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟာ စရိုက်(၆)ပါးနဲ့ စပ်လျဉ်းတဲ့ တရားတော်များကိုဟောကြားတော်မူပါတယ်။ အဲဒီတရားတော်များကတော့…
တရားတော်ရဲ့အဆုံးမှာ နတ်၊ ဗြဟ္မာပေါင်း ကုဋေတစ်သိန်း ရဟန္တာဖြစ်ကြပြီး အနာဂါမ်၊ သကဒါဂါမ်၊ သောတာပန်ဖြစ်သွားကြတဲ့ နတ်၊ ဗြဟ္မာပေါင်းကတော့ မရေတွက်နိုင်လောက်အောင်ပါဘဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီနေ့ဟာ အင်မတန်ထူးမြတ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိသောနေ့ ဆိုရင် မှားမည်မထင်ပါဘူးလို့တင်ပြရပါတယ်။ ။
Posted by linkardipa-ashin at 10:39 PM
ဆိုဆုံးမ၍ လွယ်ကူခြင်းသည် မင်္ဂလာတပါးဖြစ်၏
ဤလောက၌ များစွာသော လူတို့သည် မိမိ၏မှားယွင်းမှုကို အကျိုးလိုလားသူ တစ်စုံတစ်ယောက်က စေတနာကောင်းဖြင့် သတိပေးပြောပြလျှင် ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ နာယူလက်ခံလေ့မရှိကြပေ။ မိမိ၏ အမြင်အသိ အယူအဆ၌သာ ကုတ်ကုတ်ကျစ်ကျစ် ဖက်တွယ်ဆုပ်ကိုင်ကာ အစွဲအလမ်းကြီးကြလေသည်။ ဝေဖန်စိစစ်မှု ၀ိဘဇ္ဇဥာဏ်ရှိထားသူ အချို့မှာမူ ယင်းသို့မဟုတ်ပေ။ မိမိ၏ သတိလစ်ဟင်း မှားယွင်းမှုကို တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူက ထောက်ပြညွှန်းဆိုလာလျှင် ၀မ်းပန်းတသာ မှတ်ယူလက်ခံ၏။ ``မြုပ်ကွယ်နေသော ရတနာရွှေအိုးကြီးကို ဖော်ထုတ်ပေးလိုက်သည့်အလား ကျေးဇူးများလှပေသည်´´ ဟု ကြည်ဖြူနှစ်ခြိုက်သဘောပိုက်လေ၏။ ထိုသူများသည်သာ မျက်မှောက်သံသရာ၌ ချမ်းသာကောင်းကျိုး စည်ပင်ပွားတိုးမည်ဟု ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ ကျူးရင့်ညွှန်းဆိုကြလေသည်။ ယင်းသည့်အချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အလေးထားမှတ်သားနာယူဖွယ်ရာ ဗုဒ္ဓပိဋကတော်လာ ဖြစ်ရပ်ကို အကျဉ်းမျှ ဖော်ပြလိုက်ရပေသည်။
ကောသလတိုင်း တောအုပ်တစ်ခု၌ သီတင်းသုံးနေလျှက်ရှိသော ရဟန်းတော်တစ်ပါးသည် တစ်နေ့တွင် ဆွမ်းခံရာအပြန် ရေကန်ထဲသို့ဆင်းကာ ကြာပန်းတို့၏ မွှေးရနံ့ကို ရှူရှိုက်နေမိ၏။ မရှေးမနှောင်းကာလမှာပင် ရသေ့တစ်ဦးရောက်လာကာ ထိုကန်ထဲမှ ကြာရိုး ကြာစွယ် ကြာပန်းများကို ချိုးဖြတ်ယူနေ၏။ ထိုအခိုက် တောစောင့်နတ်က ``အို- အရှင်ရဟန်း၊ ကြာပန်းကိုနမ်းရှူဘိ၏။ အရှင်သည် အနံ့သူခိုးပါတကား´´ ဟုပြစ်တင်ပြောကြားလေသည်။ ထိုအခါ ရဟန်းက ``အသင် တောစောင့်နတ် ငါသည် ကြာပန်းကို ထိရုံမျှပင်မထိ၊ အနံ့ကိုရှူရုံမျှဖြစ်ပါလျှက် အနံ့သူခိုးဟု ဘာကြောင့် ဆိုရသနည်း။ ကြာရိုး၊ ကြာစွယ် ကြာပွင့်တို့ကို ချိုးဖြတ်ယူသူကိုတော့ ဘာကြောင့် ကြာသူခိုးဟု မဆိုသနည်း´´ ဟုမေး၏။ ``အရှင်ရဟန်း ၊ ထိုသူသည် ကိလေသာအညစ်အကြေးထူပြောနေသူဖြစ်၏။ တရားကျင့်နေသူမဟုတ်။ ထိုသူကို ကျွန်ုပ်ပြောဆိုရန်မရှိပါ။ အရှင်ရဟန်းသည်ကား အမြိုက်တရားကို ရှာဖွေကျင့်သုံးနေသူဖြစ်ရာ အမွှေးရနံ့၌ သာယာစွဲမက်မိလျှင် ဂန္ဓတဏှာတည်းဟူသော တစ္ဆေသရဲ၏ ခြောက်လှန့်ခြင်းကို ခံရပေတော့အံ့။ အဘယ်သို့လျှင် တရားကျင့်သုံးနိုင်ပါတော့မည်နည်း´´ ဟုတောစောင့်နတ်က ပြန်ပြောလေသည်။ ထိုအခါ ရဟန်းသည် သဘောသက်ဝင် လက်ခံရုံမျှမက နောင်အခါ အပြစ်တွေ့က ပြောပြရန်ပင် ဖိတ်မန္တကပြုလိုက်လေသည်။ ။
ထို့ပြင် မိမိထက် အသက်သိက္ခာ ရာထူး ဂုဏ်သိမ်၊ စည်းစိမ်ဓန ကြီးမားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်စေ၊ တန်းရည်တူ ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်စေ၊ နိမ့်ကျသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကပင်ဖြစ်စေ မိမိ၏ အကျိုးကိုလိုလား၍ မိမိ၏ လိုအပ်ချက်ကို ထောက်ပြဆုံးမလာလျှင် မိမိအနေဖြင့် ကြည်ဖြူစွာလက်ခံရမည်သာ ဖြစ်ပေသည်။ ယင်းအချက်ကို မန်လည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက အောက်ပါအတိုင်း လမ်းညွှန် ဆုံးမတော်မူခဲ့ပါသည်။
``နာနာကျင်ကျင်၊ အပြစ်မြင်တိုင်း၊ ၀မ်းတွင်းမသို၊ ဟုတ်တိုင်းဆို၍၊ ကျိုးလိုစိတ်က၊ ဆုံးမတတ်သူ၊ ဆရာဟူလော့´´
Posted by linkardipa-ashin at 8:52 PM
ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာစတင်တည်ထောင်သောနေ့ (သို့) မဟာသ...